အဟောင်းထဲက အစုတ်တွေ – ၄ – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
အဟောင်းထဲက အစုတ်တွေ – ၄
၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၇ ရက်
ဘ၀မှာ ပထမဆုံး ကြုံဖူးတဲ့ အရေးအခင်း
အဲ… တောင်ကြီးမှာ ကျောင်းတက်နေတုန်း တရုတ်အရေးအခင်းနဲ့လည်း ကြုံလိုက်ရပါသေးတယ်။ အဲဒီ့ အရေးအခင်းက တစ်ပြည်လုံးမှာ ဖြစ်ခဲ့တယ် ထင်တယ်။ အခု ပြန်ရှာကြည့်တော့ ၁၉၆၇ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၆ ရက် နေ့မှာ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။
တောင်ကြီးမြို့ကိုလည်း ကူးစက်လာခဲ့ပြီး ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းရှေ့မှာလည်း အော်သံ ဟစ်သံတွေ ခပ်သဲ့သဲ့ ကြားခဲ့ရပါတယ်။ ကျောင်းတံခါးကို လုံနေအောင် ပိတ်ထားခဲ့ကြပြီး ဆရာမတွေက ကျွန်တော်တို့တွေကို ကျောင်းရဲ့ မြေတိုက်ခန်းထဲ ပုန်းခိုင်းခဲ့လို့ ပုန်းနေခဲ့ရတာကို မှတ်မိနေပါသေးတယ်။ မျက်စိထဲတောင် မြင်ယောင်နေသေးတယ်။
အဲဒီ့အချိန်က တရုတ်ပြည်မှာ ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေး စတင်ဆင်နွှဲနေချိန်နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေခဲ့ပါတယ်။
ဗမာပြည်မှာတော့ ဗိုလ်နေ၀င်း အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီး ငါးနှစ်ကျော်အကြာပေါ့။ တိုင်းပြည်ကြီးကို ချောက်ထဲကျမယ့်ဆဲဆဲ လက်မတင်လေးအလိုမှာ ကယ်တင်ခဲ့ရရှာလေသူ ဗိုလ်နေ၀င်းရဲ့ အောင်မြင်မှု အသီးအပွင့်တွေကတော့ ငွေကြေး ဖောင်းပွခဲ့တယ်၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ရှားပါးခဲ့တယ်၊ အဆိုးဆုံးကတော့ ဆန်ရှားတာပါပဲ။
ဗမာတွေ့ အတွက် ဆန်က အသက်သွေးကြော။ အဲတော့ ဒါတွေကို အာရုံ လွှဲနိုင်ဖို့အတွက် ဗိုလ်နေ၀င်းဆိုတဲ့ ကျေးဇူးရှင်ကြီးက သည်အရေးအခင်းကို ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ သူ့လက်ပါးစေတွေက လသာလမ်းက တရုတ် အလယ်တန်းကျောင်းကို မီးရှို့ခဲ့တဲ့အပြင် တရုတ်ကျောင်းသူလေးတွေကို အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့လိုက်တဲ့နည်းနဲ့ သည်အရေးအခင်းကို စတင်လိုက်ပါတယ်။ ခေတ်ပေါ် စကားနဲ့ ပြောရင်တော့ သူ့လက်ပါးစေတွေ မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ “ဒေါသထွက်နေတဲ့ လူအုပ်ကြီး”ပေပဲပေါ့ ခင်ဗျာ။
သူကိုယ်တိုင်က တရုတ်ကပြားတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ်ရေးကြုံတဲ့အခါ ဇာတ်တူသားချင်းလည်း စားတာပေါ့။ သည်အရေးအခင်းက လူထုကြီးရဲ့ သူ့အပေါ်မှာ ထွက်နေတဲ့ ဒေါသတွေကို အထုပ်ဖြည်နိုင်အောင် ဖန်တီးပေးလိုက်တာပါ။ ကြားထဲက ခံရသူတွေကတော့ ပေါက်ဖော်တွေပေါ့။ အီစိမ့်နေအောင်ကို ခံလိုက်ရတာပ။
အဲတုန်းက ဗမာပြည်မှာ တရုတ်က သုံးမျိုးပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ကိုးကန့်တွေ ဘာတွေ ကြားတောင် မကြားဖူးသေးဘူး။ ယူနန်ဆိုတာ ဝေလာဝေး။ အင်္ကျီတိုရယ်၊ အင်္ကျီရှည်ရယ်၊ ဟကရယ် သုံးမျိုးပဲ ဗမာပြည်မှာ ရှိတာ။ အင်္ကျီတိုဆိုတာက ကွမ်တုံတရုတ်တွေ၊ မူရင်းက ကွမ်တုံပြည်နယ်က လာ။ အင်္ကျီရှည်က ဟုတ်ကျံ့၊ ဖှုကျန့်ပြည်နယ်က လာတာ၊ ဟကဆိုတာက ဆိုတာက အဲဒီ့နှစ်မျိုးကြား၊ စကပေါ့။
ကျွန်တော့်ဘေးတော်ကြီး၊ မေမေဘွားဘွားရဲ့ အဘိုးက အင်္ကျီရှည်မျိုးလို့ အမေ့ဆီက သိထားရပါတယ်။
တောင်ကြီးမှာ ကျောင်းတက်ခဲ့ပုံနဲ့ ပတ်သက်သမျှ ဒါလောက်ဆို အကုန်စုံပြီ မှတ်တယ်။ သတိရလာတော့လည်း ကျွန်တော့်ထုံးစံအတိုင်း ရတဲ့နေရာမှာ ဖောက်ဖောက် ရေးသွားတာပေါ့ဗျာ။ စာဖတ်သူ လူကြီးမင်းလည်း အခုလောက်ဆို ကျွန်တော့် အရူးလွယ်အိတ်နဲ့ အသားကျနေပြီပဲဟာ… နော့။
ရေးရင်းနဲ့ မျက်ရည်ပေါက်ပေါက် ပြန်ကျရတဲ့အဖြစ်တစ်ခု
လောဓလေ့မှာ နေခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ခါးသီးတယ်လို့ ရေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ ခါးသီးပုံတွေ သိပ်အကျယ် မချဲ့ရသေးဘူး။
မေမေ့ကို အညိုအမည်းနဲ့ ဖူးရောင်နေအောင် အဖေက ရိုက်နှက်ထားတဲ့ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ မြင်ရတဲ့ အကြိမ်ပေါင်းက မနည်းဘူး။ ကျွန်တော်သည်လည်း ကျွဲရိုက် နွားရိုက် အရိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ တစ်ခါများဆို ကျွန်တော့်ကို တိုင်မှာ ခါးပတ်နဲ့ ပတ်ပြီး တုပ်နှောင် ရိုက်နှက်တာအထိ ခံရဖူးပါတယ်။
စဉ်းစားကြည့်ပါဗျာ။ တောင်ကြီးကျောင်း သွားတော့ ကျွန်တော့်မှာ ဆယ်နှစ် မပြည့်သေးဘူး။ အဲဒီ့ထက် ငယ်တဲ့ အရွယ်မှာတင်ပဲ ကျွဲလို နွားလို အရိုက်ခံခဲ့ရတာပါ။
အဆိုးဆုံးက အရိုက်ခံရလို့ အသားနာတဲ့အတွက် အော်တာ၊ ငိုတာကိုပဲ အသံမထွက်နဲ့၊ အသံထွက်ရင် ပိုနာမယ်ဆိုပြီး ဆင့်ဆင့် အရိုက်ခံရတဲ့ ဘ၀ပါ။ အဲဒါကြီးကတော့ အတော့်ကို ဆိုးပါတယ်။ ပြေးစရာ၊ အားကိုးစရာ ဘာမှ မရှိတဲ့ဘ၀၊ ကယ်မဲ့သူ ဝေးတဲ့ဘ၀၊ သည်မိဘကိုပဲ အားကိုးနေရတဲ့ဘ၀မှာ အဲလို အနှိပ်စက်ခံလိုက်ရခြင်းဟာ အေးနိုင်ကြောင့် ပေါက်တဲ့ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်က ဆူးထက် အဆမတန် ခိုင်မာ များပြားပြီး ချွန်မြနေပါတော့တယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ အဖေ့ဘ၀နောက်ခံ၊ ပညာရည်၊ ဇောစတာတွေကို မြင်လာခဲ့ပြီမို့ အဖေ့အပေါ် နားလည်လို့ ရခဲ့ပြီ ဖြစ်သလို အဖေ့ကျေးဇူးကြောင့် အခုလို နေနိုင်၊ စားနိုင်၊ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာကိုလည်း သဘောပေါက်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပေမယ့်၊ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်က အဖေပေးခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်တွေ မရှိတော့ပြီ ဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်တော့်အသည်းထဲမှာ နက်နက်ရှိုင်းရိုင်း စူးဝင်နေတဲ့ ဒဏ်ရာအမာရွတ်ကြီးကတော့ ကျန်ရှိနေဆဲပါပဲ။
မမေ့နိုင်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေထဲက အပြင်းစားတစ်ခုကတော့ အဖေနှိပ်စက်လို့ ညကြီး မိုးချုပ် လောဓလေ့အိမ်ကနေ အမေ ကျွန်တော့် လက်ကိုဆွဲပြီး ထွက်သွားတဲ့ ညတစ်ညပါပဲ။ ဘယ်ကို သွားမှန်း မသိဘူး။ နောက်ဆုံးမှာ လောပိတနဲ့ ၁၂ မိုင် ဝေးတဲ့ လွိုင်ကော်က ကယားအိမ် တစ်အိမ်ကို ရောက်သွားတာ မြင်ယောင် မှတ်မိနေတယ်။ နောက် ဘာဆက်ဖြစ်လဲ မမှတ်မိတော့ဘူး။
အဲဒီ့အိမ်ကို မရောက်ခင် လမ်းတစ်လျှောက်မှာ မေမေက မောလား… သားလို့ မေးတဲ့ အသံကို ပြန်ကြားယောင်မိသလို မောပါဘူး… မေမေလို့ ကျွန်တော် ပြန်ဖြေခဲ့တာကိုလည်း မှတ်မိနေပါသေးတယ်။ တကယ်တော့ မောတာပေါ့ဗျာ။ ၇ နှစ် ၈ နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက် လျှောက်လိုက်ရတဲ့ ခရီးက နီးမှ မနီးတာပဲ။ ဒါပေမယ့် မေမေ့ကို သနားတဲ့စိတ်၊ ချစ်တဲ့စိတ်၊ ကျွန်တော့်ကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှာ စိုးရိမ်တဲ့စိတ်နဲ့ မမောပါဘူး မေမေရယ်လို့ ကျွန်တော် ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက် မေမေ့ကို အားပေးနိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းပဲလေ။
အဲဒီ့ကယားအိမ်က ကျွန်တော်တို့ သားအမိကို ပေါင်မုန့်တစ်ပန်းကန်နဲ့ သကြား တစ်ပန်းကန် ချကျွေးတာလည်း မြင်ယောင် မှတ်မိနေပါတယ်။ ကျွန်တော် မစားခဲ့တာကိုလည်း မှတ်မိပါတယ်။ အဲဒီ့အရွယ်မှာ ပေါင်မုန့်ထောပတ်သုတ်ကို ကြိမ်ဖန်များစွာ စားဖူးပေမယ့် တစ်ခါမှ သကြားနဲ့ တို့မစားဖူးပါဘူး။ ဘယ်သူကမှလည်း အဲလိုမျိုး တစ်ခါမှ ချမပေးဖူးပါဘူး။ တစ်သက်တာမှာလည်း အဲဒီ့ တစ်ခါပဲ ကြုံဖူးတာပါ။
အဲဒါက လွဲရင် ကျန်တာတွေ ကျွန်တော် မမှတ်မိတော့ဘူး။ အဲဒီ့ညက ဘယ်မှာ အိပ်တယ်၊ နောက် ဘာဆက်ဖြစ်တယ်လဲ မသိတော့ဘူး။ သေချာတာကတော့ နောက်ဆုံးကျတော့လည်း မယားနဲ့ သားကို ကမ်းကုန်အောင် ရိုက်နှက် နှိပ်စက်နိုင်တဲ့ ဖအေလို့ ခေါ်သူ လူကြီးလက်ထဲ ပြန်ရောက်ရတာနဲ့ အဆုံးသတ်တာပဲလေ။
တောင်ကြီးကအပြန်မှာ အဖေပေးတဲ့ လက်ဆောင်
တောင်ကြီးမှာ ကျောင်းနေပြီး ပြန်လာတော့ တောင်ကြီးသားတွေရဲ့ “ဗျ”အသုံးကို နှုတ်စွဲလာတယ်။ “ဟုတ်ကဲ့ဗျ”လို့ ပြောတတ်လာတယ်။
အဲဒါနဲ့တင် ရိုင်းတယ်ဆိုပြီး အဖေ ဆော်ပလော်တီးတာ ခံလိုက်ရပါရောလား။
စာမတတ် ပေမတတ်၊ စာမဖတ် ပေမဖတ် ပီတာ ဖခင်ကြီးဆိုတော့ အဲဒါကို ရိုင်းတယ် မှတ်ရှာတာပေါ့။ ကျွန်တော်ကလည်း လေးတန်းပဲ ဖြေထားရသေးတော့ ရင်းမြစ်ကို မသိဘူး။ အသားလွတ်ကြီး ခံလိုက်ရပါတယ်။
ရင်းမြစ်ကို သိတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘ၀လောက်ကျတော့ ဦးဆော်ပလော်က မရှိတော့ဘူး။
“ဗျ”ဆိုတာ “ဘုရာ့”က ဆင်းသက်တာပါ။ ကာလရွေ့လျောသွားတော့ “”ဗျ” ဖြစ်သွားပါတယ်။ (အခုခေတ် ဖွဘုတ်မှာ ဘ၀ကို “ဘွ”လို့ ပြောသလိုမျိုး၊ လင်မယားကို “လင်များ”လို့ ပြောသလိုမျိုး အသံထွက် နှောသွားတာပါ။)
“ခင်ဗျ”ဆိုတာက “သခင်ဘုရာ့”ပါ။ “ခင်ဗျား”ဆိုတာ “သခင်ဘုရား”က ဆင်းသက်တာပါ။
ဒါဖြင့် အမျိုးသမီးတွေ သုံးတဲ့ “ရှင်” “ရှင့်”က ရောလို့ မေးစရာ ရှိပါတယ်။ သူက ပိုရှင်းပါတယ်။ “အရှင်” “အရှင့်”ဆိုတဲ့ “အရှင်သခင်”ကို ပြောတဲ့ အသုံးက ဆင်းသက်တာပါ။
ကျွန်တော်၊ ကျွန်မဆိုတဲ့ အသုံးကလည်း စာလုံးပေါင်း ဘယ်လိုပြောင်းရေးရေး အနက်ရင်းကတော့ မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချတဲ့ မြန်မာအသုံးပါ။
“ကျွန်ုပ်”ဆိုတာက ကျွန်တော်ဆိုတာထက် မိမိကိုယ်ကို ပိုနှိမ့်ချပြီး အနုပ်စား ကျွန်ပါလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲတာ ဖြစ်ပါတယ်။ “ကျုပ်”ဆိုတာက အဲဒီ့ ကျွန်ုပ်ကို မြန်မြန် ပြောရင်း ကူးသွားတာပါ။ ကျွန်တော်မှ ကျနော်၊ ကျနော်မှ ကျော်… ကျော်လို့ ပြောမိတတ်ကြသလို ဖြစ်ပါတယ်။
လေးတန်းစာမေးပွဲပြီးတော့ လောဓလေ့ကို ခဏပြန်ရသေးတယ် ထင်တယ်။ အဲဒီ့မှာ ဗျကြောင့် အဆော်ခံလိုက်ရတာ မှတ်တယ်။ ကျောင်းဖွင့်ခါနီးတော့ မန္တလေးကို သွားရပါတယ်။ အဖေ လိုက်ပို့ပြီး ကျွန်တော့်ကို အမှတ် ၉ ကျောင်းမှာ ကျောင်းအပ်ပါတယ်။ ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစားထားခဲ့ပါတယ်။
အမှတ် ၉ မှာ
အမှတ် ၉ ကျောင်းက၊ အရင် သာသနာပြုကျောင်းအနေနဲ့ စိန့်ပီတာ (St. Peter’s) လို့ ထင်ရှားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးက ဦးလှ။ ဆရာကြီးက အော်စတင်ကားလေးနဲ့ ကျောင်းလာတယ်။
သည်ကျောင်းမှာ နဂိုကတည်းက မကောင်းလှတဲ့ ကျွန်တော် ပျက်စီးခြင်း ငါးပါး စုံတော့တာပဲ။
ကျောင်းက ယောက်ျားလေးတွေချည်း ထားတဲ့ကျောင်း။ နယ်စုံက ယောက်ျားလေးပေါင်းစုံ စုနေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ငါးတန်းကျောင်းသားဆိုတာက အငယ်ဆုံး။ အတန်းကြီး ရှစ်တန်း၊ ကိုးတန်း၊ ဆယ်တန်း တက်နေတဲ့သူတွေက ပိုများတယ်။
အဲဒီ့မှာ အပြာစာအုပ်တွေ လှိုပ်ပေါလယ်အောင် ဖတ်ဖူးတော့တာပါပဲဗျား။ အရွယ် မတိုင်ခင်၊ မသိအပ်သေးခင် ဖိုမကိစ္စတွေကို စသိလာတော့တာပါပဲ။
ဘယ့်နှယ်ဗျာ၊ ငါးတန်းတက်စဆိုတော့ ကျွန်တော့်မှာ ဆယ်နှစ်သာသာပဲ ရှိသေးတယ်။ ၁၁ နှစ်ကိုက သီတင်းကျွတ်ပြီးမှ ပြည့်မှာလေ။ အဲဒီ့အရွယ်လေးနဲ့ အဲဒါတွေ သိတယ် ဆိုတာ အခုခေတ်မှာတော့ အဆန်းမဟုတ်ပေမယ့် ဟိုခေတ်တုန်းကတော့ မတရား စောနေတော့တာပေါ့။
နောက်အတတ်ကောင်းတစ်ခုက ဆေးလိပ်သောက်တာ အဲဒီ့မှာ စတာပဲ။ အဲဒါလည်း အတန်းကြီးတွေရဲ့ ကျေးဇူးနဲ့ပေါ့။ နဂိုကမှ မခိုင်ကျည်တဲ့ ကျွန်တော်၊ ဘာမဆို စမ်းလုပ်ကြည့်ချင်တဲ့ ကျွန်တော် စမ်းလိုက်ပါရောလား။ စမ်းရင်းနဲ့ ကြိုက်သွားပါရောလား။
ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းစာဆိုတာကလည်း အဲတုန်းက သာသနာပြုကျောင်း အငွေ့အသက်နဲ့ဆိုတော့ နားလည်အောင် တတ်အောင် သင်တာကို ဦးစားပေးတာ။ အဲတော့ ကျောင်းစာက သိပ်မဖိစီးဘူး။ စာသင်ချိန် သင်၊ စာကြည့်ချိန် ကြည့်ရင် ပြီးပြီ။ အားချိန်၊ နားချိန်က အပြည့်ရတယ်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေဆို တစ်နေကုန်နီးနီး အားနေတာ။ အားတဲ့အချိန်ဆို မဟုတ်တာလုပ်လို့က တယ်ကောင်းပေါ့။
ကြက်ခြေနီ အသင်းဝင်တယ်။ ဘင်ခရာအသင်း ၀င်တယ်။ ဘင်ခရာကျေးဇူးနဲ့ ပလွေ မှုတ်တတ်လာတယ်။ ဒို၊ ရေ၊ မီ၊ ဖာတွေ သိလာတယ်။ ကြက်ခြေနီကကျတော့ ကျွန်တော်တို့ခေတ်မှာ အခုခေတ် ကြက်ခြေနီလို ပေစုပ်စုပ် အရောင်အဆင်းနဲ့ အ၀တ်အစား မဟုတ်ဘူး။ အပေါ်အောက် အဖြူ ၀တ်ရတာဆိုတော့ အဲဒါကို သဘောကို ကျလို့။
တစ်ခါတစ်လေ နေ့လယ်နေ့ခင်းဆိုရင် ကိုခင်မောင်ကျော်ဆိုတဲ့ အတန်းကြီးက ကျောင်းသားတစ်ယောက်က ကျောင်းခန်းမထဲမှာ စန္ဒယား လာလာတီးတယ်။ အဲဒါဆို သွားမော့ပေါ့။ သူ့နာမည် မှတ်မိနေတာက နောင်အခါ ကျွန်တော် ရန်ကုန် ရောက်လာတော့လည်း သူနဲ့ ပြန်ဆုံတဲ့အပြင် ကျွန်တော်ရေးတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို သူ အကော်ဒီယံ တီးပေးခဲ့ဖူးလို့ပါ။
နောက်တစ်ယောက်က ရှစ်တန်းက အစ်ကိုကြီး။ ကိုခင်မောင်ဆွေ။ သူနဲ့က ဘင်ခရာမှာ သိသွားတာ။ သူက စစ်ခရာ မှုတ်တာ။
နေ့လယ် ထမင်းစားချိန်ဆို သူ့စက်ဘီးပေါ် ကျွန်တော့်ကို တင်ခေါ်သွားပြီး နဘဲကြူး ရပ်ထဲက သူ့အိမ်ကို သွားတယ်။ သူ့အိမ်မှာ ထမင်းကျွေးတယ်။ အမဲသားဟင်းနဲ့ အများဆုံး စားရတာကို မှတ်မိနေတယ်။ ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစားဘ၀မှာ ဟင်းကောင်း ကျွေးကောင်း မစားရတော့ သူ့အိမ်မှာ စားရတဲ့ အမဲသားဟင်းက နတ်သုဒ္ဓာပေပဲပေါ့။
အဲဒီ့ကျောင်းမှာနေရင်းနဲ့ ကျောင်းက ဘောလုံးကွင်းထဲ စက်ဘီး လာလာစီးတဲ့ နေ့ကျောင်းသား သူငယ်ချင်းရဲ့ စက်ဘီးကို ယူယူစီးရင်း စီးတတ်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် သည်တိုင်း မတက်တတ်၊ မဆင်းတတ်ပါဘူး။ ခွတက်၊ ပြီးမှ စီး။ ရပ်၊ ပြီးမှ ခွဆင်း။ အဲဒါမျိုးပဲ တတ်ခဲ့တာ။
အမှတ် ၉ ကျောင်းမှာ သိပ်အဆင်မပြေတာက အစားအသောက်ပဲ။ အမှတ် ၃ မှာတုန်းကလို ကျောင်းက ချက်တာ သိပ်မကောင်းဘူး။ ၀က်သားဆို အခေါက်မှာ အမွှေးတွေ ငုတ်စိမြင်ရသေး။ ဒါပေသည့် ဘာမှ ရွေးစရာ မရှိတာ၊ ရှိတာ စားပေါ့။
မုန့်ဖိုးကတော့ တစ်မတ်လား ရတယ်။ ဆေးလိပ်ပါ သောက်တတ်နေပြီဆိုတော့ ဘယ်လောက်ပါတော့မလဲ။ ကျွန်တော့်မှာ အခက်ကြုံပြီပေါ့။ အငတ်ခံနိုင်မှ ဆေးလိပ်သောက်နိုင်တာပေါ့။
အဲတော့လည်း အလွယ်လမ်း လိုက်ပြန်တာပေါ့ဗျာ။ ကျောင်းပိတ်ရက်ဆို ဈေးချိုသွားတယ်။ မုန့်တော့ စားရတာပေါ့။ မုန့်ဖိုးတော့ ဘယ်သူမှ မပေးကြဘူး။ ကြီးကြီးမေတို့၊ ကြီးကြီးဦးတို့၊ မမသန်းတို့က ဆန်သည်တွေ မဟုတ်ကြတော့ဘူး။ ဦးနေ၀င်းတန်ခိုးနဲ့ ပဲသည်တွေ ဖြစ်ကုန်ကြပြီ။ ပဲမျိုးစုံ ရောင်းနေကြပါတယ်။
အခက်က ကြုံနေတုန်း အကွက်က မမလှလှဆီမှာ သွားတွေ့တာ။
မမလှလှက ကွမ်း၊ ကွမ်းသီးနဲ့ ကွမ်းယာထဲ ထည့်တဲ့ အဆပလာတွေ ရောင်းတယ်။ မမလှလှက ဟိုကြီးကြီးတွေထက် အရောင်းအ၀ယ် ပိုကောင်းတယ်။ ကျွေးချင် မွေးချင် စိတ်ကလည်း ဟိုအဒေါ်တွေထက် ပိုများတယ်။ အဲတော့ မမလှလှဆိုင်သွားရင်း ဂွင်တွေ့သွားတာ။
ဘာဂွင်လဲဆိုတော့ မမလှလှရဲ့ ဆိုင်က ရောင်းကြေးပိုက်ဆံသေတ္တာထဲကနေ ငါးကျပ်၊ တစ်ဆယ် အလစ် နှိုက်တော့တာပေါ့။ တောင်ကြီးကျောင်းတုန်းက အလစ်သမား၊ အခုကျတော့ သူခိုး။ ကျွန်တော် တိုးတက်လာပုံ ပြောပါတယ်။
ဒါပေသည့် မကောင်းမှုဟူသည် ဆိတ်ကွယ်ရာ မရှိဆိုတဲ့အတိုင်း သိပ်တောင် မခိုးလိုက်ရဘူး။ မမလှလှ သိသွားတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ဆုံးမတယ်။
ခိုးတုန်းကသာ ခိုးတာ၊ အဲလို မိသွားတော့လည်း ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ ကောင်က ရှက်သေးတာ။ အဲဒါနဲ့ မမလှဆိုင် မသွားတော့ဘူးပေါ့။
ဘိုင်ကျတဲ့ဘ၀ကလည်း ဒုံရင်း ပြန်ရောက်တော့တာပေါ့။
ကျေးဇူးတင်စရာ ကောင်းတာက မမလှလှက ဘယ်သူ့ကိုမှ ပြန်ပြောပြခဲ့ဟန် မတူပါဘူး။ မေမေ့ကိုတောင် ပြောမပြခဲ့ဘူးထင်တယ်။ ပြောပြခဲ့ရင်လည်း အမေ့ဆီကနေ အဖေ့ဆီရောက်၊ ကျွန်တော်လည်း အသေ အရိုက်ခံရဦးမှာ သေချာပါတယ်။
ကျွန်တော့်အဖေ အရိုက်ကြမ်းတာလည်း သူတို့အားလုံး သိထားပြီး ဖြစ်လေတော့ကာ ကျွန်တော့်ကို သနားတာနဲ့ ပြန်မတိုင်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သည့်ထက် အတတ်စုံတော့တာက ညဘက်ကျရင် ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းကို ကျော်တက်၊ အပြင်ကို ခိုးထွက်ပြီး ညဈေးတန်းကို သွားတာပါ။ အဲဒါလည်း အဖော်ကောင်းတာနဲ့ လုပ်ပြန်တာ။
အသက်မှ ၁၁ နှစ် မပြည့်သေးဘူး။ အတတ်က စုံနေပြီ။
ညဈေးတန်းမှာ အတန်းထဲက တစ်ယောက်က ဈေးထွက်တယ်။ သူ့နာမည်လည်း မမှတ်မိတော့ဘူး။ သူ ဆိုင်ထွက်တယ်ဆိုတာ သူ့မိဘကို ကူရတာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့က အဲဒီ့ဆိုင်မှ သွားထိုင်ပြီး လေလို့ ကောင်းနေတာပေါ့။
တခြား ဘာမှတော့ မလေပါဘူး။ ဆေးလိပ်သောက်တာ အလွန်ဆုံးပေါ့။ ၁၁ နှစ်ဆိုတော့လည်း တခြား ဘာမှ မလုပ်တတ်သေးပါဘူး။
ဒါလည်း မကြာဘူး။ အဆောင်မှူးက သိသွားပြန်တယ်။ ကျောင်းအုပ်ကြီးဆီ တင်ပြတယ်။ ကျောင်းအုပ်ကြီးက မိဘခေါ်တယ်။
လောပိတကနေ အဖေ လိုက်လာတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား အဖြစ်ကနေ ထုတ်လိုက်တယ်။ အဖေက သူ့သဘောနဲ့ သူ ထုတ်တာလား၊ ကျောင်းက လက်မခံတော့တာလားတော့ ကျွန်တော်မျိုးလည်း မသိဘူး။
သီတင်းကျွတ် ကျောင်းပိတ်ရက် ရောက်တာနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား မဟုတ်တော့ဘဲ ကျောင်းပြန်ဖွင့်တာနဲ့ ဦးကြီးကိုကိုတို့အိမ်ကနေ ကျောင်းတက်ရပြီပေါ့။
အမှန်တော့ မေမေဘွားဘွားရဲ့ အိမ်ပေါ့။ ၈၁ လမ်း၊ စက်ရှင်လမ်းနားမှာပါ။ ဘေးတစ်အိမ်ကျော်က ထွန်းမမ ပုံနှိပ်တိုက် ရှိတယ်။ အဲဒီ့ပုံနှိပ်တိုက်က ရွယ်တူတစ်ယောက်နဲ့ ကစားဖက် ဖြစ်လိုက်သေးတယ်။ သူ့နာမည်တော့ မေ့သွားပြီ။
အိမ်ရဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်၊ ပေတစ်ရာလမ်းရဲ့ ဟိုတစ်ဖက်ခြမ်းမှာတော့ ရေအိုးစင် တစ်စင်ရှိတယ်။ အဲဒါတော့ မမေ့ဘူး။ နဖူးစည်းက “ဦးသန်းမြင့်နှင့် ဇနီးများ ကောင်းမှု”တဲ့ဗျား။
အဲဒီ့ခေတ်က ဦးသန်းမြင့်က သူဌေးပေါ့။ သူက ဇနီး လေးယောက်ဆိုလား ရှိတယ်။ ဈေးထဲကို အဲ့ဒီ့ထဲက တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ သွားရင်း အဲဒီ့တစ်ယောက်က ထဘီတစ်တည် ပူဆာတယ် ဆိုပါစို့။ သူက ၀ယ်ပေးမယ်လို့ ပြောပြီး ဆိုင်နဲ့ အဆင်ကို သေချာ မှတ်လာခဲ့တယ်။
ပြီးရင် မယားကြီးဆီကို သွားတယ်။ မယားကြီးက အဲဒီ့ ထဘီကို လေးယောက်စာ လေးကွင်း တစ်ခါတည်း ၀ယ်ပြီး ကားတစ်စီးနဲ့ အိမ်သုံးအိမ်ကို မယားကြီးကိုယ်တိုင် တစ်ကွင်းစီ ပတ်ပို့ရတယ်ဆိုပဲ။ ဟုတ် မဟုတ်တော့ မသိဘူး။ ပိုင်တယ်နော် smile emoticon
အမှန်တော့ ဦးသန်းမြင့် ပိုင်တာထက်၊ သူ့ကြွယ်ဝမှုက ပိုင်တာပါ။ မိန်းမ လေးယောက်စလုံးကို တစ်ယောက် တိုက်တစ်လုံး၊ ကားတစ်စီးနဲ့ ထားနိုင်တဲ့သူပေကိုး။
ကျောင်းစာမှာတော့ ကျွန်တော်က ပုံမှန်ပဲ။ အညံ့ကြီးလည်း မဟုတ်၊ အတော်ကြီးလည်း မဟုတ်ဘူး။ အလယ် အလတ်ကနေ သွားနေတာ။ အမှန်ကတော့ ကြိုးစားရင် ရပါတယ်။ စာကျက်ရင်ပေါ့။ ကျွန်တော်က အဲဒီ့ ကျက်စာတွေကို တယ်ပျင်းတာ။ စိတ်ကလေးကလည်း လေလို့ ကောင်းနေပြီ မဟုတ်လား။
ဦးကြီးကိုကိုတို့ အိမ်မှာနေတာ့ ပန်းကန်ဆေးတဲ့ တာဝန်ကို ကျွန်တော်ယူရတယ်။ ကြီးကြီးက ချက်ပေါ့။ ညစာ စားပြီးပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ သုံးယောက်စားတဲ့ ပန်းကန်မှန်သမျှ ကျွန်တော်ပဲ စုပုံဆေးရတာပေါ့။
နောက်ဖေး မီးဖိုချောင်ဘေးက အုတ်ခင်းထားတဲ့ နေရာလွတ်မှာ စဉ့်အိုးတစ်လုံး ချထားတယ်။ အဲဒီ့ထဲလည်း ကျွန်တော်ပဲ ရေဖြည့်ရတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီ့က ရေနဲ့ စားပြီးသား ပန်းကန်တွေ စိမ်ပြေနပြေ ထိုင်ဆေးပေရော့ပဲ။
အဘိုးတို့ မြောက်အိမ်ကိုလည်း တစ်ခါတစ်ရံသွားပေါ့။ ကျန်တဲ့ ကျောင်းအားချိန်မှာတော့ အိမ်ထဲမှာပဲ စာအုပ်ဖတ်၊ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ်နေ၊ စာတွေ၊ ကဗျာတွေ ရေးပေါ့။
ဟုတ်တယ်။ လေးတန်း ကျောင်းနံရံကပ်စာစောင်မှာ ကဗျာတစ်ပုဒ် ပါပြီးကတည်းက ကျွန်တော်က စာ၊ ကဗျာ မှန်မှန် ရေးနေခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အစွမ်းပြခွင့်တော့ မကြုံတော့ပါဘူး။
မကြုံလည်း ဘာအရေးလဲ။ လောပိတမှာ နေကတည်းက စိတ်ညစ်ရင် စာရေးပြီး စိတ်ဖြေရတဲ့ အလေ့အထက အလိုလို စွဲလာခဲ့တာ။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲက မွန်းကြပ်မှုတွေကို ပြောပြစရာ စာရွက်ပဲ ရှိတာကိုး။
ငါးတန်းရောက်နေတဲ့အခါတော့ လူရည်လေး နည်းနည်းလည်လာပြီဖြစ်သလို တစ်နေ့ကျရင် ကိုယ်သည်လည်း သီးခြားရပ်တည်ရမယ့် လူသားတစ်ယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်နေပါပြီ။ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ကိုယ်ဆိုတာကလည်း သိလာနေတယ်။ အဲဒါကြောင့် စာ ကဗျာရေးတာတွေ ပိုလုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။
တွေ့သမျှ စာအုပ်တွေလည်း တွန်းဖတ်နေပါတယ်။ ဘာစာအုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် မျက်စိအောက် ရောက်လာတာ အကုန်ဖတ်တာပဲ။ နားလည်တာလည်း ရှိ၊ နားမလည်တာလည်း ရှိပေါ့။
Amy Nang ရိုက်ခံရတဲ့အရသာကို ကိုယ်ချင်းစာတယ်။ ကျနော်ဆို ၃တန်းတုန်းက ပေါင်ကျိုးတဲ့အထိ ရိုက်ခံရတာ… တိုင်မှာ ကြိုးတုပ်ပြီး ရိုက်ခံရတာတော့ ပြောမနေနဲ့တော့… ဆရာ့လိုပဲ… အခု အသက်တွေ ကြီးလာပြီးတော့မှ အဖေ့ရဲ့ကောင်းကွက်တွေနဲ့ ပြန်စဉ်းစားနိုင်တာ… ငယ်ငယ်ကဆို အဖေကို သေပါစေလို့တောင် ဆုတောင်းခဲ့ဖူးတာ… စိတ်ထဲမှာ ဘာအငြိုးမှ မရှိပေမယ့် ဆူးတော့ ကျန်တယ်။
Shin Shin Aung Htunကိုယ်လည်း ငယ်ငယ်က ရိုက်နှက်အဆုံးမခံခဲ့ရတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ နာကျင်တဲ့ ရသကို သင်ယူတတ်ခဲ့တယ်။ အမ့ကို မုန်းတာမျိုးတော့ လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး။ ခု အမေတစ်ယောက်ဖြစ်လာတော့ ကလေးကို တခါတရံ လက်ပါမိတယ်။ ဆင်ခြင်တုံတရား နည်းပါးတာပေါ့လေ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆူးတစ်ချောင်းတော့ မဖြစ်စေချင်လို့ ကြိုးစားရဦးမယ်။
Kay Zacအမှတ် ၉ကျောင်းလို့ ကြားလိုက်တိုင်း မျက်စိထဲ မြင်လာတာက ကျောင်းပေါက်ဝနဲ့တည့်တည့်က ဘောလုံးကွင်းကြီးပဲ၊ ပြီးရင် ဘေးက သများတို့ ခစ်စမတ်မှာ သွားပြီး ငတ်ကြီးကျနေကြသံဝင်း
May Thandar Win 😦 ဆရာရေ ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းဘူး။ ရိုက်နှက် ဆုံးမတဲ့ မိဘတွေ တအားမုန်းတယ်။ ငယ်ဘ၀ တလျှောက်လုံး အမေက လက်ဖျားနဲ့တောင် မထိခဲ့တာကိုလည်း ပိုကျေးဇူးတင်မိတယ်။ ဒါနဲ့ ဆရာ ဦးနေ၀င်းတံခိုးနဲ့ ပဲသည်တွေ ဖြစ်ကုန်ကြပြီ။ စာကြောင်းမှာ တံခိုး ဖြစ်နေတုန်းပဲ
ATKကျေးဇူးပါ။ နောက် တွေ့ရင်လည်း ပြောဦးနော်။ သများက အိုက်သာမျိုး စိတ်မချိုးဒတ်ဝူးးးးး
May Thandar Winပြောမယ် အပြန်အလှန်ပေါ့ ဟိ
May Thandar Winမှတ်မှတ်ရရ မြန်မာတိုင်းမ်မယ်လုပ်တုန်းက ပထမဆုံးအကြိမ် အရက်သောက်ပြီး မူးဖူးတာ အိမ်ပြန်လာတော့ ကုတင်ပေါ် ဘိုင်းကနဲ မှောက်ရက်အိပ်ပျော်သွားတုန်း အမေလာပြီး တင်ပါးကို ဖျတ်ဖျတ် လာရိုက်တာ တသက်လုံးမှာ အမေ သမီး အသားကို ပထမဆုံးထိဖူးတာပဲ။ ဒါလည်း ခြင်ရိုက်ပေးသလောက်တောင် မရှိဘူး 🙂
May Thandar Win;P ဟိ
Oakker Seithuအခုချိန်ထိ အဲဒီဗျက နှုတ်ကျိုးနေတုန်းပဲ။
ငယ်တုန်းက ကျွန်တော့် မေမေ ရိုက်ရင် ဘာလုပ်လို့ ဘယ်နှစ်ချက် အရိုက်ခံရမယ်။ ရှောင်ရင် ပိုအရိုက်ခံရမယ်လို့ပြောပြီး ရိုက်တယ်ခင်ဗျ။ အဲလိုရိုက်မယ်ဆို လက်ပိုက်ပြီး ဖြစ်ဖြစ်၊ တိုင်ကို ဖက်ပြီး ဖြစ်ဖြစ် အရိုက်ခံရတယ်။
တစ်တန်းလား နှစ်တန်းလားမသိဘူး။ အရိုက်ခံရလို့ အော်ရင် ပုံမှန်အတိုင်း (အား) လို့မအော်ဘူးတဲ့။ (အားဗျ၊ အားဗျ) ဆိုပြီး အော်တယ်တဲ့။ ဟီး ။ ဗျဆိုတဲ့ စကားလုံးကို နှုတ်ကျိုးနေတာကိုး
ATKTeacher Nilar လည်း အကြမ်းဖက်သမကြီးပေပဲကိုးးးးးးး မထင်ရဘူးနော်
Oakker Seithuအဖေတာဝန်ကော အမေတာဝန်ကော ထမ်းရတာဆိုတော့ ဒီနည်းပဲ သုံးမှဖြစ်မှာကိုး ဆရာရဲ့
ATKအေး… ရှေ့နေပဲလိုက်။ အဲဒီ့နည်းကို ကိုယ့်သားသမီး လက်ထက်မှာ လုံးဝ မသုံးမိစေနဲ့။ ကောင်းတဲ့ အလုပ်မဟုတ်ဘူး။
Nilar Myintကျွန်မက သားတွေကို မလုပ်ရဘူးအရိုက်ခံရမယ်လို့ ပြောထားတဲ့တားမြစ်ချက်တွေလုပ်ရင်၊ လိမ်ပြောရင်၊ ခိုးရင် ရိုက်ပါတယ်ဆရာရေ။ အများအားဖြင့် ၂ ချက်ပါ။ အပြစ်ငယ်ရင် ၁ချက်ပေါ့လေ။ တင်ပါးကိုပဲ ရိုက်ပါတယ်။ ဒေါသတကြီး ကျွဲရိုက် နွားရိုက်တော့ တစ်ခါမှမရိုက်ဖူးပါဘူး။ မရိုက်ခင် အပြစ်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး သူတို့ လုပ်ရပ် မှန်မမှန် အရင် သုံးသပ်ပြသေးတာပါ။ တရားခွင်မှာလိုလေ။ ဆရာမပီပီ လေရှည်တာပါ။ အရိုက်ခံရင်လက်ပိုက် (ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ တိုင်ဖက်ပေါ့လေ) ရပါတယ်။ ရိုက်တုန်း လက်နဲ့ကာမိရင် လက်နာသွားမှာစိုးလို့ပါ။ အကြောင်းအရာ တော်တော်များများကို ဘာကြောင့်လုပ်သင့်တယ် မလုပ်သင့်ဘူး၊ ကောင်းတယ် မကောင်းဘူးဆိုတာတွေကို အမြဲလိုလို ဥပမာတွေ ပေးပြီး ဆုံးမထားပါရက်နဲ့ မစဉ်းမစားလုပ်လို့ကတော့ ၀ါးခြမ်းပြား ဒဏ်ပါပဲဆရာရေ ။ (အခုကျတော့လည်း အသက်က စကားပြောလာတာထင်ပါရဲ့ ကျောင်းမှာတောင် တုတ်မကိုင်ဖြစ်တော့ပါဘူး)
ATK MaShin MaShin မရေ… မရိုက်တာတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ မလွှဲသာလို့ ရိုက်မယ်ဆိုရင် Teacher Nilar Myint ပြောသလို ဒေါသတကြီး ရိုက်တာမျိုး မဖြစ်အောင် ဂရုစိုက်ပါ။ ကလေးကို လိမ္မာစေချင်တာလား၊ ငါ့ဒေါသကို အထုပ်ဖြည်မှာလားဆိုတာ ကလေးကို ရိုက်ခါနီးတိုင်း စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ သိပ်ငယ်သေးတဲ့ အရွယ်မှာ နာနာတောင် တအား ရိုက်စရာ မလိုပါဘူး။ စပ်စပ်ကလေးလောက်နဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ သိတတ်တဲ့ အရွယ်ရောက်ရင် လုံးဝ ရိုက်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။ နားလည်အောင် ပြောပြနိုင်ပါပြီ။
အဲ… စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတာက ဘယ်သားသမီးဖြစ်ဖြစ် မအေ ရိုက်တာကို သိပ်မဥပါဒ်ကြဘူးဗျ။ ဖအေကိုသာ ဘ၀တစ်သက်စာ ပိုပြီး မှတ်ကြတာပါ။
၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၈ ရက်
မြန်မာ အကွာအဝေးအတိုင်းအတာ စနစ်
နေ့ကျောင်းသားဘ၀မှာ စိတ်ချမ်းသာစရာ ကောင်းတာကတော့ ကျောင်းသွားကျောင်းပြန် ခရီးပါပဲ။
အိမ်က ၈၁ လမ်းပေါ်၊ ၁၉ လမ်းနဲ့ သိပ်မလှမ်းလှတဲ့ နေရာမှာ။ အဲဒီ့ကနေ ၂၅ လမ်နဲ့ ၂၆ လမ်းကြား၊ ရွှေတချောင်း အနောက်ဖက်မှာ ရှိတဲ့ အမှတ် ၉ ကျောင်းကို ခြေလျင် ကြိတ်ရတာပေါ့ဗျာ။
တစ်နေ့တစ်နေ့ ကျောင်းသွား ကျောင်းပြန် စုစုပေါင်း မန္တလေးအခေါ် ၉ ပြကျော်ကို လျှောက်ခဲ့ရတာဗျ။ နည်းနည်းနောနော မဟုတ်ဘူး။
မန္တလေးအခေါ် တစ်ပြ၊ နှစ်ပြကို ကြားရုံပဲ ကြားဖူးပြီး ဘယ်လို တွက်မှန်း မသိသူတွေအတွက် အကျယ်လေး နည်းနည်း ချဲ့ပြပါ့မယ်။
မန္တလေးမြို့ကို မင်းတုန်းမင်းကြီးက သာသနာ ၂၄၀၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ တည်ခဲ့တာမို့ သူ့နန်းတော် တစ်ပတ် (လေးဘက် လေးတန်) ကို “တာ”ပေါင်း ၂၄၀၀ နဲ့ တည်ခဲ့ပါတယ်။ နန်းတော်က စတုရန်းပုံစံမို့ အဲဒီ့ တာပေါင်း ၂၄၀၀ ဟာ တစ်ဘက်မှာ တာပေါင်း ၆၀၀ စီ ရှိတယ်။ တစ်တာက ခုနစ်တောင် ရှိတယ်။ ပေနဲ့ ပြောရင် ၁၀ ပေခွဲ။
“တာ”ဆိုတာ မြန်မာတို့ရဲ့ အတိုင်းအထွာပါ။ အကွာအဝေး၊ အတိုင်းအရှည်ကို ပြောတဲ့ စကားလုံးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ “နေ့တာ” “ညဉ့်တာ”ကို လူတိုင်း ကြားဖူးမှာပါ။ အလားတူ “တာတို” “တာလတ်” “တာဝေး”ပြေးပွဲဆိုတာတွေဟာလည်း အဲဒီ့ “တာ”ကို ပြောတဲ့ ဝေါဟာရပါပဲ။
တာမှာက အမျိုးမျိုးရှိပြန်တယ်။ မြင့်မိုရ်တာ၊ စက္က၀ါတာ အစရှိသဖြင့်။ ရှုပ်သထက် ပိုရှုပ်ကုန်မှာစိုးလို့ အသေး ထပ်မစိတ်တော့ပါဘူး။ (ကျွန်တော်လည်း အဲသလောက် အသေးစိတ် မသိပါဘူး။ 🙂 )
မန္တလေး နန်းတော်ရဲ့ တာပေါင်း ၂၄၀၀ ကိုတော့ မြင့်မိုရ်တာနဲ့ တွက်ထားတာမို့ တစ်တာဟာ ခုနစ်တောင် ဖြစ်နေတာပါ။ စက္က၀ါတာ ဆိုရင် တစ်တာကို ဆယ်တောင် ရှိပါတယ်။ (လူအထင်ကြီးအောင် လျှောက်ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ သိသလောက်လေး ပြန်လက်ဆင့်ကမ်းပေးတာပါ။)
တစ်နည်းပြောရင် နန်းတော် အရပ်မျက်နှာ မြို့ရိုး အုတ်တံတိုင်းတစ်ဖက်၊ ဒါမှမဟုတ် ကျုံးတစ်ဖက်ဟာ တာပေါင်း ၆၀၀ ရှိတယ်။ ပြအနေနဲ့ ပြောရင်း ၁၂ ပြ ရှိတယ်။
ပြဆိုတာက ပြအိုးလို့ ခေါ်တဲ့ နန်းတော်မြို့ရိုး ထိပ်က ပြဿဒ်အဆောင်ငယ် တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အကွာအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တစ်ပြဟာ တာပေါင်း ၅၀ ရှိသွားတယ်။ တစ်တာကို ၁၀ ပေခွဲ ရှိတာမို့ တစ်ပြဟာ ၅၂၅ ပေ၊ ကိုက်နဲ့ ပြောရင် ၁၇၅ ကိုက်၊ မီတာနဲ့ ပြောရင် ၁၆၀ မီတာရှိပါတယ်။
တစ်ဖာလုံဟာ ကိုက်ပေါင်း ၂၂၀ ရှိတာမို့ တစ်ပြနဲ့ တစ်စိတ် (တစ်ပြရဲ့ လေးပုံတစ်ပုံ)ဟာ တစ်ဖာလုံလောက် ရှိတယ်။ လွယ်အောင် ပြောရင် ငါးပြဟာ လေးဖာလုံ ပြည့်ဖို့ ငါးပေပဲ လိုပါတော့တယ်။ သည်တော့ ၁၀ ပြဆိုရင် တစ်မိုင်ပြည့်ဖို့ ၁၀ ပေပဲ လိုတော့မှာပါ။
(သေချာလည်း ပြန်တွက်ကြည့်ရင် တွက်ကြည့်ကြဦးနော်။ ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော်တော့ ဦးလှဆွေထက် အခြေခံ သင်္ချာ ပိုမှန်အောင် တွက်နိုင်မယ် ထင်တာပဲ။ 😀 )
အဲ… ကျွန်တော့် နေ့စဉ် ကျောင်းသွားကျောင်းပြန်ခရီးဟာ အသွား ကိုးပြ၊ အပြန် ကိုးပြ ရှိတာမို့ စုစုပေါင်း ၁၈ ပြဆိုတော့ ၁၄ ဖာလုံ (တစ်မိုင်နဲ့ ခြောက်ဖာလုံ) ကျော်ကျော်ပါ။
သည်ခရီးမှာ ဘယ်သူမှ ကျွန်တော့်ကို တခုတ်တရ လိုက်ပို့မနေပါဘူး။ မနက်တိုင် ကိုယ့်ဘာသာ လွယ်အိတ်လေးလွယ်၊ ကြီးကြီးထည့်ပေးတဲ့ ထမင်းချိုင့်လေးဆွဲတဲ့ပြီး ငိုက်စိုက်ငိုက်စိုက်နဲ့ တစ်ယောက်တည်း ဟိုမော့ သည်မော့ လျှောက်ရတာပေါ့။
အပြန်လည်း တစ်ယောက်တည်း ပြန်ပေါ့။ ဘယ်သူမှ လာကြိုပေးမနေဘူး။ ကျွန်တော်တင်လားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး။ တစ်ကျောင်းလုံးမှာ သူငယ်တန်း ကလေးတွေက လွဲရင် ပထမတန်းကလေးကအစ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကြိတ်နေကြသူချည်းပဲ။ စက်ဘီးနဲ့ လာတဲ့သူက လာပေါ့။
ကျွန်တော့်တော့ ဘယ်သူက စက်ဘီးဝယ်ပေးနေမှာလဲ။ ဦးကြီးကိုကိုမှာတောင် စက်ဘီး မရှိဘူးထင်တယ်။ ကျွန်တော် ကလေးငယ်ဘ၀တုန်းကတော့ သူ စက်ဘီးစီးတာ၊ အိမ်မှာ စက်ဘီး ရှိတာ မှတ်မိတယ်။ ငါးတန်း သူ့အိမ်မှာနေတော့ စက်ဘီးက သူ့အိမ်မှာ မရှိတော့ပြန်ဘူး။ စီးပွားရေး အခြေအနေအရနဲ့ တူပါတယ်။ သူက ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်း ဘာအလုပ်မှ မလုပ်တာကိုး။
အဲ… အဲလိုလည်း မဟုတ်ဘူး ထင်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း ရောနေပြီ။ ဈေးချို အေရုံထဲမှာပဲ ဦးကြီးကိုကိုနဲ့ ကြီးကြီးက ပရဆေးဆိုင် ထွက်လိုက်ကြသေးတယ်။ ဟုတ်တယ်။ ခုမှ နည်းနည်း ပြန်မှတ်မိလာပြီ။
ဦးကြီးကိုကိုရဲ့ ဇနီး၊ ကြီးကြီး မခင်ရီရဲ့ အစ်မ၀မ်းကွဲတစ်ယောက်က အေရုံထဲမှာ ပရဆေးဆိုင်ထွက်တယ်။ အဲဒီ့ ဆိုင်နဲ့ ကပ်လျက်က ဆိုင်ခန်းလေး တစ်ခန်းငှားပြီး သူတို့ကလည်း တစ်ဆိုင်ထွက်တာ။ ကြီးကြီးပဲ အကုန်လုံး လုပ်ရတာပါ။
ဦးကြီးကိုကိုကတော့ တိုက်ပုံအင်္ကျီနဲ့ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ၀တ်လို့ စားလို့၊ ဘိုကေက ကျော့လို့နဲ့ ဈေးကို သွား၊ ဟိုကျတော့ ဆိုင်ပေါ်မှာ ငုတ်တုတ်ကြီး ထိုင်၊ ဆေးပေါ့လိပ် ထိုင်သောက်နေတာပဲ။
ဈေးသွားရင် ကျွန်တော်တို့ အိမ်ရှေ့ ၈၁ လမ်းပေါ်ကနေ ဈေးချို အရောက်ပြေးတဲ့ ကားဝါကို စီးရတယ်။ မန္တလေးမှာက ကားဝါ၊ ကားနီ၊ ကားပြာဆိုတဲ့ ချက်ပလက် (ရှဲဗှရားလေး Chevrolet) ခေါင်းတို ဘတ်(စ်)ကားအိုကြီးတွေနဲ့ လိုင်းကား ပြေးတယ်။
ကားတွေမှာ ယာဉ်လိုင်း အမှတ်စဉ်တွေတော့ ရှိတာပေါ့။ ကျွန်တော်တော့ မှတ်မထားမိဘူး။ ကားဝါ၊ ကားနီ၊ ကားပြာပဲ သိတော့တယ်။ အခုလည်း ရှိသေး မှတ်တယ်။ ဘုရားကြီး (မဟာမုနိ) သွားချင် ကားပြာ စီး၊ မန္တလေး တောင်ခြေသွားချင်ရင် ကားနီ စီးရတာလောက်တော့ မှတ်မိနေပါသေးတယ်။
အဲဒီ့ကားတွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တစ်ခုတည်းသော အများသုံး ယာဉ်ပေါ့။ မန္တလေးမှာ အဲဒီ့အချိန်က တစ်မြို့လုံး စက်ဘီးပဲ သုံးကြတာ။ တစ်မြို့လုံးက မြေပြန့်တော့ စက်ဘီးကလည်း အဆင်ပြေတာကိုး။ အဲတော့ အငှားယာဉ်ဆိုတာ မရှိဘူး။
အငှားယာဉ်အဖြစ် အဲဒီ့တုန်းက သုံးကြတာက မြင်းလှည်း။
မြင်းရထားခေတ်ကိုတော့ ကလေးတုန်းက ကြုံလိုက်သေးပေမယ့် ကျွန်တော် ငါးတန်းကျတော့ မန္တလေးမှာ မြင်းရထားတွေ မရှိတော့ဘူး။
ရထားနဲ့ လှည်းနဲ့ ဘာကွာလဲ သိချင်ကြသေးလား
ဟုတ်ကဲ့… လှည်းက ဘီးနှစ်ဘီးနဲ့ တွန်းလှည်းလို ပက်လက်ကလေး။ အဲဒါကိုမှ အပေါ်က မိုးရေကာဖျင် ပေါင်းမိုး တပ်ထားတာ။ မြင်းလှည်းဆရာက မြင်းရဲ့ နောက်တည့်တည့် လမ်းကို မျက်နှာမူတဲ့ ခုံတန်းမှာထိုင်တယ်။ ခရီးသည်က လှည်းရဲ့ နောက်က တံခါးလေးက တစ်ဆင့် တက်ပြီး လမ်းကို ပခုံးထား စီးရတယ်။ ဒိုင်နာတို့၊ ဟိုင်းလပ်(စ်)တို့လို ကားတွေရဲ့ နောက်ခန်းက ခုံတန်းတွေလိုပေါ့ဗျာ။ မျက်နှာချင်းဆိုင် နှစ်တန်း ရှိတယ်။ တစ်ဖက် လူကြီး ၂ ယောက် ချောင်ချောင် စီးလို့ ရတယ်။ ကြပ်ကြပ် တိုးဝှေ့စီးရင် ခြောက်ယောက်ပေါ့။
မြင်းရထားဆိုတာကတော့ အခု မေမြို့မှာ အနည်းအပါး ရှိနေပါသေးတယ်။ ရထားလုံး (ရထလုံးလို့ အသံထွက်ကြတယ်)လို့လည်း ခေါ်တယ်။ သူကကျတော့ ဘီးလေးဘီးနဲ့။ ရထားတွဲ အငယ်စားလေးလို ပတ်လည်ကို သစ်သားနဲ့ အခိုင်အမာ ဆောက်ထားတာ။ လှည်းဆရာက အဲဒီ့ ရထားအိမ်ရဲ့ အပြင်ဘက် ခေါင်မိုးထက်လောက် နေရာကနေ မောင်းတယ်။
အထဲမှာ ထိုင်ရတာက နောက်တန်းက လမ်းကို မျက်နှာမူတယ်၊ ရှေ့တန်းက လမ်းကို ကျောပေးထားပြီး ထိုင်ကြရတာ။ သူကလည်း အမှန်တော့ လေးယောက်စီးပဲ။
နောက်ပြီးတော့ အဲဒီ့အချိန်က မန္တလေးက လမ်းမတွေပေါ်မှာ နွားလှည်းတွေကိုလည်း တော်တော် သုံးနေကြတုံးဗျ။ လမ်းလျှောက်ရင်း အဲဒီ့ နွားချေး ရှောင်နေရတာကိုက အလုပ်တစ်ခု၊ ဖုံနံ့၊ နောက်ချေးနံ့၊ မြင်းချေးနံ့လေးတွေ တသင်းသင်းနဲ့ ကျွန်တော် ချစ်သော မန္တလေးပေါ့ဗျာ။
ရေးနေရင်းနဲ့မှ တခြားဟာတွေလည်း စွတ်ကယ်စွတ်ကယ် ပြန်သတိရတာနဲ့ ငါးတန်းကနေ ကလေးဘ၀ဘက် နည်းနည်း ပြန်သွားလိုက်ဦးမယ်နော်။
မန္တလေးမှာ ကျွန်တော့်ကို ရှင်ပြုပေးခဲ့ကြတာပါ။ အရွယ်လေးမှ ဘာရှိဦးမှာလဲ၊ ငါးနှစ်လား၊ ငါးနှစ် မပြည့်သေးဘူးလား မသိဘူး။ အရင်ကတော့ ဓာတ်ပုံလေးတွေ ရှိပါတယ်။ မေမေက ကျွန်တော့်ကို စိတ်ပေါက်ရင် ကျွန်တော့်ဓာတ်ပုံတွေကို ဆုတ်ဖြဲပစ်တော့တာမို့ အခုတော့ ဘာအစအနမှ မကျန်တော့ဘူး။
အမယ်… အဲတုန်းက ကလေးလေး ကျွန်တော်က ချစ်စရာလေးဗျ။ ကျွန်တော့်သား ငယ်ငယ်က ရုပ်နဲ့ ချွတ်စွပ်ပဲ။ ကြီးတော့သာ တဖြည်းဖြည်း အမြင်ကတ်စရာ ကောင်းလာတော့တာပလေ။ 😀
အဘိုးဦးချစ်မောင်က ပြုပေးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ခေါင်းပေါင်းတလူလူ၊ ဘန်ကောက်ပုဆိုး တရွှမ်းရွှမ်းနဲ့ တဟဲဟဲ ရယ်ပြီး လူတကာကို ဧည့်ခံနေတဲ့ အဘိုးကို မျက်လုံးထဲ ပြန်မြင်ယောင်လာတယ်။ သော်သော်တောင် ၀တ်ကောင်းစားလှနဲ့ ရှိနေခဲ့သေးတယ်။ အဖေတော့ မပါဘူး။ အဖေက အဲတုန်းက လောဓလေ့မှာပဲ။ အမေကတော့ ရှိသပေါ့။
အဲဒီ့ရှင်ပြုပွဲက ပျော်စရာကြီးပါ။ မေမေဘွားဘွားလည်း ပွဲတက်သေးလား၊ မတက်ဘူးလားတော့ မမှတ်မိဘူး။
လမ်း ၈၀ ကျုံးထိပ်တန်းက သာသနာ့ဗိမာန် အပေါ်ထပ်မှာ ဧည့်ခံတာ။ ရေခဲမုန့်စားရတာ မှတ်မိနေတယ်။ ပရိသတ်ကို အဘိုးက ကောင်းကောင်းကျွေးခဲ့တာ။ လူတွေ စည်တာလည်း မှတ်မိတယ်။
ညကျတော့မှ အခက်ပွေကြရတော့တာ။ ကျွန်တော် ရှင်ပြုတာကို အပျော်လွန်သွားတဲ့ ဦးကြီးကိုကိုက အရက်တွေ သောက်ပြီး သူငယ်ချင်းကား တက်မောင်းရာက တိုက်မိလို့ ဆိုတဲ့သတင်းက ညဘက်ကျ ရောက်လာတာမို့ အိမ်မှာ ပူကြရပြန်တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ မေမေဘွားဘွားက စိုက်ပြီး လျော်ပေးရတာပေါ့။
ကျွန်တော်က သင်္ကန်းမနိုင်သေးတဲ့အရွယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ကိုရင်ကို နာမည်ပေးတဲ့အခါ နေ့နံသင့်အောင် ရှင်အာစရလို့ မှည့်ခေါ်လိုက်ကြတယ်။ လေးလေးမြင့်ကလား၊ အဘိုးလေး ဦးလှမောင်ကပဲလား မသိဘူး၊ ရှင်အာပြဲလို့ ပြောင်ခေါ်တာနဲ့ ကျွန်တော့် ကိုရင်နာမည်လည်း ရှင်အာပြဲ ဖြစ်သွားပါရောလား။ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်တယ်။ ကျွန်တော့် အသံကလည်း အတော်ကြီး ကျယ်ပေသကိုး။
အဲဒီ့ကနေ နောက် နည်းနည်းထပ် ပြန်ငယ်လိုက်ဦးမယ်။ ကျွန်တော် စကားတတ်စ အချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ကျွန်တော်တို့ မန္တလေးအိမ် ဖွဲ့စည်းပုံကို အရင်ပြောမှ ဖြစ်မယ်။
အိမ်က အရှေ့ဘက် (ကျုံးဘက်) ကို မျက်နှာမူပြီး ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်။ အိမ်ဝင်းရဲ့ တောင်ဘက်ခြမ်းကို ကပ်ဆောက်ထားတယ်။
အတွင်းခန်း ဖွဲ့စည်းပုံကတော့ ၀င်ပေါက်က အကျယ်ကြီး။ အဲဒီ့ ၀င်ပေါက်ရဲ့ ဘယ်ဘက်၊ အိမ်ရဲ့ တောင်ဘက် ခြမ်းမှာ အခန်းတစ်ခန်း ရှိတယ်။ မေမေဘွားဘွားက အဲဒီ့အခန်းမှာ နေတာ။ ငါးတန်းမှာ ကျွန်တော် အဲဒီ့အိမ်မှာနေတော့ အဲဒီ့အခန်းက ကျွန်တော့်အခန်း ဖြစ်သွားပြီ။ မေမေဘွားဘွားက မေမေတို့နဲ့ လောဓလေ့မှာ ကျန်ရစ်ရှာတာကိုး။
မေမေဘွားဘွာအန်းပြီးရင် အထပ်ခိုးပေါ် တက်တဲ့ လှေကား ရှိတယ်။ အထပ်ခိုးပေါ် တက်တဲ့ လှေကားဆိုလို့ ခနော်နီ ခနောနဲ့ မမှတ်နဲ့ဗျ။ လှေကားအိမ်နဲ့၊ လှေကားဘေးမှာ နှစ်ပေလောက်ကျယ်တဲ့ နေရာလပ်နဲ့။ ပြီးရင် နောက်တစ်ခန်း။ အဲဒီ့အခန်းမှာ ကျွန်တော် ငယ်ငယ်က ကျွန်တော်တို့ သားအမိ အိပ်ကြတာကို မှတ်မိတယ်။ အဖေလာရင်လည်း အဲဒီ့အခန်းမှာပဲ အိပ်တယ် ထင်တယ်။ ကျွန်တော် ငါးတန်းကျတော့ ဥိးကြီးကိုကိုတို့ လင်မယားက အဲဒီ့အခန်းမှာ အိပ်ကြတယ်။
အဲဒီ့အခန်း ပြီးရင် အိမ်မကြီးက ဆုံးသွားပြီ။
၀င်ပေါက်နဲ့ တည့်တည့်ရယ်၊ ၀င်ပေါက်ရဲ့ ညာဘက်ခြမ်း၊ ဘယ်ဘက်က အခန်းတွေလောက် ကျယ်လွင့်တဲ့ နေရာရယ်ကကျတော့ အလွတ်။ ဟာလာ ဟင်းလင်း။ အဲဒီ့ အခန်းကျယ်ကြီးရဲ့ ခေါင်းရင်းဘက် ထောင့်မှာ ကွပ်ပျစ်ကျယ်ကြီး တစ်လုံး ရှိတယ်။ အဲဒီ့ကွပ်ပျစ်ကြီးပေါ်မှာ ဦးကြီးကိုကိုနဲ့ ကြီးကြီးက ညတိုင်ကျ အိပ်ကြတာ။ နေ့လယ်ကျရင်တော့ ဟာလာ ဟင်းလင်းပေါ့။
ကွပ်ပျစ်ခြေရင်းမှာ ဦးကြီးကိုကိုရဲ့ ဧရာမ ဘီရိုကြီး ရှိတယ်။ ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်ကြီး တပ်လို့၊ ကနုတ်ပန်းတွေနဲ့ ရှေးဘီရိုကြီး။
အိမ်အလယ် ၀င်ပေါက် အနီးမှာက စားပွဲတစ်လုံး ရှိတယ်။ တင်ချင်တာတွေ တင်ထားတာ၊ စာအုပ်၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ဘာညာ။ ဦးကြီးကိုကိုရဲ့ ဆေးလိပ်၊ ဆေးတံစတာတွေလည်း ရှိတယ်။ အဲဒီ့ စားပွဲရဲ့ နောက်မှာတော့ ထမင်းစားတဲ့ စားပွဲနဲ့ ကုလားထိုင်တွေ။ ကျွန်တော်တို့ သားအမိ အခန်း ၀င်ပေါက်နဲ့ တည့်တည့် လောက်မှာ။
အဲဒီ့ ထမင်းစားပွဲရဲ့ အိမ်နောက်ဖေး နံရံကို ကပ်ပြီး တည်ထားတာက အုတ်စင်လေးတစ်ခု။ အဲဒီ့ အုတ်စင်လေး ပေါ်မှာ သဲခင်းထားတယ်။ သဲပေါ်မှာ သောက်ရေအိုးနှစ်လုံးတင်ထားတယ်။ သဲကို ရေဆွတ်ထားတော့ သောက်ရေက အေးသပေါ့။
သူ့ဘေးမှာက ကြောင်အိမ်။ ရှေးကြောင်အိမ်ပါ။ ကြောင်အိမ်ရှေ့မှာ ကျီးကျီးရဲ့ မှန်တင်ခုံက ပြတင်းပေါက်ကို မျက်နှာမူပြီး မြောက်ဘက်နံရံနဲ့ ကပ်လျက် ရှိနေတယ် ခွေးခြေလို့ ခေါ်တဲ့ ခုံပုလေးနဲ့ ထိုင်မှ မှန်ကြည့်လို့ရတဲ့ မှန်တင်ခုံ အနိမ့်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါ အိမ်အတွင်းပိုင်း ဖွဲ့စည်းပုံပဲ။ အုတ်စင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ အခန်းကြားမှာ နောက်ဖေးကို ထွက်တဲ့ တံခါး ရှိတယ်။ အိမ်ရှေ့တံခါးမကြီးနဲ့ တည့်တည့်ပဲ။ နောက်ဖေးကို ထွက်လိုက်ရင် ကျွန်တော် ပန်းကန်ဆေးရတဲ့ နေရာရှိသော အုတ်ခုံရှိတယ်။ အုတ်ခုံရဲ့ ဘယ်ညာမှာ အခန်းနှစ်ခန်း ရှိပြီး အိမ်မကြီးနဲ့ဆက်နေတဲ့ အုတ်တိုက် အဆွယ်လေးတွေ ရှိတယ်။ ညာဘက် (မြောက်ဘက်)က မီးဖိုချောင်။ အိမ်မကြီးနဲ့ ဆက်ထားတဲ့ သံတိုင်နဲ့ ပြတင်းပေါက် ရှိပြီး အမြဲလို ဖွင့်ထားတယ်။ ညကျမှ ပိတ်တယ်။
ဘယ်ဘက်မှာက စတိုခန်း။ ဗျုတ်စဗျင်းတောင်းတွေ ထားတယ်။ တစ်ခါ ၀င်မွှေတော့ တွေ့ဖူးတာက အခုခေတ် ကွန်ပျူတာနဲ့ ရိုက်တဲ့ ပုံနှိပ်စက်အကြီးစားလောက်ပဲ ရှိတဲ့ ခဲစာလုံး လက်လှည့် ပုံနှိပ်စက်ကလေး။ အခုနေများ အဲဒါတွေ ရှိသေးရင် တန်လိုက်မယ့် ဖြစ်ခြင်း။ မသုံးတာ ကြာတော့ ပျက်နေပြီပေါ့။
အဲ… နောက်ထပ် အရေးကြီးတာလည်း တွေ့လိုက်သေးသဗျ။ အဲဒါ ငါးတန်း အဲဒီ့အိမ်မှာ နေတုန်း ၀င်မွှေရင်း တွေ့တာပါ။ ကလေးတုန်းကတော့ တစ်ခါမှ မမွှေခဲ့ဖူးပါဘူး။
ဘာတွေ့တယ် မှတ်တုံး။ ဖို-မဆက်ဆံရေး ပညာပေး စာအုပ်လေးခင်ဗျ။ ကျွန်တော့်မှာ လှပ်ကြည့်ပြီး ရင်တွေတောင် တုန်သွားတာနဲ့ အသာပြန်ချထားခဲ့တယ်။ နောက်တစ်ခါ ၀င်မွှေတော့ မတွေ့တော့ဘူး။
အဲ… အဲဒီ့ စတိုခန်းကလည်း ကျွန်တော်တို့ သားအမိအိပ်ခန်းနဲ့ ဆက်နေတဲ့ သံတိုင်တပ် ပြတင်းတစ်ခု ရှိသေးပေမယ့် အဲဒီ့ပြတင်းကိုတော့ အသေပိတ်ထားတယ်။
အထပ်ခိုးကလည်း ထပ်ခိုးသာဆိုတယ်၊ ရန်ကုန် အထပ်ခိုးလို နိမ့်နိမ့်လေး မဟုတ်ဘူး။ လူနှစ်ရပ်စာလောက် မြင့်တယ်။ အရှေ့ဘက် ခေါင်းရင်းမှာက ဘုရားစင်ရှိတယ်။ အဲဒါက ပြင်ကျယ် အလွတ်။ လှေကားက တက်သွားရင် ဘယ်ဘက်မှာ ဘုရားစင်။ ညာဘက်မှာက အခန်းကျယ်ကြီးတစ်ခန်း ရှိပြန်တယ်။ ကျွန်တော် ငယ်ငယ်တုန်းက သုံးခဲ့ရတဲ့ ကျွန်းပုခက်က အဲဒီ့အခန်းထဲမှာ ရှိတယ်။ အဲဒါကလွဲရင် အခန်းလွတ်၊ ဖုန် အလူးလူးနဲ့။ ဖုန်ထုက လက်မ၀က်လောက်တော့ အပျော့ပဲ။
အိမ်ကြမ်းခင်းက အုတ်တွေ စီထားတာ။ ဘိလပ်မြေမကောင်းတော့ အုတ်တစ်ချပ်နဲ့ တစ်ချပ်ကြားက သဲတွေ ပေါ်ပြီး ဟတဲ့ဟာက ဟလို့။
မျက်မမြင် မုဆိုးမနဲ့ သားတော်မောင် လူပေါ်ကြော့တို့ ဦးစီးပြီး ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ အိမ်ဆိုတော့ အိမ်ဆောက်တဲ့သူတွေ ပညာပြတာ အကြီးအကျယ် ခံထားရတာပေါ့။ အမိုးက သွပ်မိုး။ မျက်နှာကျက် မရှိတော့ ပူချက်က ကမ်းကုန်။ ပြတင်းပေါက်တွေတော့ အများသား။
အိမ်ဖွဲ့စည်းပုံ ပြောပြီးတော့မှ ကျွန်တော့် ဇာတ်လမ်းကို ပြောမှ ဖြစ်မှာမို့လို့ပါ။
တစ်ညသောအခါမှာ ကျွန်တော်တို့ သားအမိ အိပ်ရာဝင်သွားပြီးနောက် ခဏ အကြာ၊ ခြေရင်းက ရေအိုးစင်နားမှာ အင်္ကျီဖြူ၊ ဘောင်းဘီဖြူဝတ်ထားတဲ့ ဦးကြီးကိုကိုကို လှမ်းမြင်လိုက်တယ်။ ဦးကြီးကိုကို အပြင်သွားနေတာ ကျွန်တော် သိတယ်။ သူပြန်မလာခင် ကျွန်တော်တို့သားအမိက အိပ်ရာဝင်နှင့်တာ။
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်က မေမေ့ကို “ဟိုမှာ ဦးကြီးကိုကို ပြန်ရောက်လာပြီ”လို့ ပြောလိုက်တယ်။
မေမေက ကျွန်တော့်ကို ပုတ်ပြီး “အေး… အေး… သား အိပ်… အိပ်…”လို့သာ ပြန်ပြောပါတယ်။
အမှန်က ကျွန်တော်က အိပ်ပျော်သွားပြီးတဲ့နောက် တစ်နာရီကျော် နှစ်နာရီကြာမှ ဦးကြီးကိုကိုက တကယ် ပြန်ရောက်လာတာပါတဲ့။
ဒါဆို ခြေရင်း ရေအိုးစင်နားမှာ ကျွန်တော် မြင်လိုက်တဲ့ အဖြူရောင်အထက်အောက်နဲ့က ဦးကြီးကိုကို မဟုတ်ဘူးပေါ့။
ကလေးတုန်းက အဖြစ်တွေထဲက ကျန်ရစ်တာတွေ ကောက်သင်းကောက်ပြီးတဲ့နောက် ငါးတန်းကျောင်းသား ဘ၀ဆီ ပြန်သွားလိုက်တော့မယ်နော်။ (ရေးရင်းနဲ့မှ ထပ်သတိရစရာ ပေါ်လာသေးရင်လည်း ရေးသေးတာပေါ့။)
ကျွန်တော့်ရဲ့ ကျောင်းသွားကျောင်းပြန်ခရီးကို သွားရာ၊ ပြန်ရာမှာ ကျွန်တော်က တစ်နေ့ တစ်မျိုး မရိုးအောင် သွားတယ်။ ဖြတ်ချင်တဲ့ လမ်းက ဖြတ်သွားတယ်။ မော့ချင်တာ မော့သွားတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဓားတန်းဝင်းမှာ မြို့မအဖွဲ့ သီချင်းတိုက်နေသံတွေ ကြားရင် ရပ်နားထောင်ချင် ထောင်လိုက်သေးတယ်။
အဲသလို သွားရင်းနဲ့ ကျွန်တော် စိတ်ကူးယဉ်တတ်လာတယ်။ ခရီးက ရှည်တော့ လမ်းတစ်လျှောက်လုံး ဟိုမော့ သည်မော့ရင်း အတွေးကို အဖော်လုပ်ရတာကိုး။ စိတ်ဆိုတာကလည်း အတိုင်းအဆမဲ့။ လက်ရှိဘ၀မှာ သိပ် မနေပျော်တဲ့အခါ စိတ်ကူးထဲက ကိုယ့်ဘ၀လေး ကိုယ့်ဘာသာ တည်ဆောက်ရင်း စိတ်ကူးထဲမှာ ပျော်တတ်လာခဲ့ပါတယ်။
မန္တလေးက စီးပွားရေး ကောင်းတဲ့မြို့ ဖြစ်လေတော့ ဖြတ်သွားရာ လမ်းတစ်လျှောက်က တိုက်တာ အိမ်ခြေ ကောင်းကောင်းတွေ၊ ကားတွေကို ငေးမောရင်း အဲဒီ့ဘ၀တွေထဲ စိတ်ကူးနဲ့ ၀င်ကြည့်တာမျိုးပေါ့။ ကျွန်တော် နေနေရတဲ့ဘ၀က မပြည့်စုံမှန်းကိုလည်း တော်တော်ကြီး သဘောပေါက်နေပါပြီ။
အဲဒီ့ခေတ်က ဂစ်တာတွေ အခုလို မတွင်ကျယ်သေးဘူး။ ကျွန်တော် သိပ်လိုချင်တာက အကော်ဒီယံ၊ အဲတုန်းက ကလေးကစားတဲ့ အကော်ဒီယံ အသေးလေးတွေ၊ အလတ်စားလေးတွေကိုဆို ဘယ်လို လိုချင်ခဲ့မှန်း မသိဘူး။ ငါးတန်းရောက်တော့ အကော်ဒီယံကြီးတွေကို သိပ်သဘောကျတတ်နေပြီ။ ကျွန်တော့်ဘ၀က အကော်ဒီယံ ဝေးစွ၊ ဘာဂျာလေး တစ်လက်တောင် ဘယ်သူကမှ ၀ယ်မပေးနိုင်တာ။ အဘိုးကို ပူဆာရင် အကော်ဒီယံမဟုတ်တောင် ဘာဂျာ တစ်လက်လောက်တော့ ရချင် ရမယ် ထင်တယ်။ ကျွန်တော်က အဲလိုလည်း မပူဆာတတ်ဘူး။
မပူဆာတတ်တာထက် မပူဆာရဲတာက ပိုမှန်မယ်။ အဖေသိသွားရင် အဆော်ခံရမှာကို ကြောက်တာက ကျွန်တော့်စိတ်ကို ကြီးစိုးနေခဲ့ပါလိမ့်မယ်။
အဘိုးဆိုလို့ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ ကလေးတုန်းက ဖော့သေနတ်ကလေးတစ်လက် ရဖူးတာကို ပြေးမှတ်မိသွား ပြန်တယ်။ အဘိုးက မန္တလေး ရိုး (Rowe’s) ကုမ္ပဏီကတောင် ၀ယ်လာပေးတာပါ။
ဒါပေမယ့် သိပ်မဆော့လိုက်ရပါဘူးဗျာ။ ရက်ပိုင်းပဲ ခံပါတယ်။ အဖေနဲ့ အမေ သတ်ကြရင်းနဲ့လား၊ အမေနဲ့ ဦးကြီးကိုကို ရန်ဖြစ်ကြရင်းလေး သေချာတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ သူတို့ဖြစ်ကြတဲ့အခါ ဓားစာခံဖြစ်သွားတဲ့ ကျွန်တော့ သေနတ် ဒင်ကလေး ကျိုးသွားတာနဲ့ ကျွန်တော့်မှာ နှမျောခြင်းကြီးစွာ။ ခုပြော ခုမြင်ယောင်သေးတယ်။ မြင်ယောင်ဆို ကျွန်တော့် ကလေးဘ၀ရဲ့ တစ်ခုတည်းသော ကစားစရာကိုး။
လောဓလေ့မှာ နေတော့ အမေကလား၊ အဖေကလား မသိဘူး၊ သုံးဘီးစက်ဘီးလေး တစ်စင်းတော့ ၀ယ်ပေးဖူးတယ်။ အဲဒါကတော့ ပျင်းစရာကြီးဗျာ။ ခဏဆော့ပြီး ပြီးတာပဲ။ ဒါပေမယ့် တခြား ဆော့စရာ မရှိတော့ အဲဒါကိုပဲ အိမ်ပေါ်မှာ ပတ်စီးရတာပေါ့။
အဖေ ထီပေါက်တော့ ကျွန်တော့်ကို ၀ယ်ပေးတာက မက်ခယ်နို (Meccano) ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ဘာသာ ပုံဖော် တပ်ဆင်ရတဲ့ သံပြားတွေ၊ ၀က်အူတွေ၊ သံချောင်းတွေ၊ ၀က်အူလှည့်တွေပါတဲ့ ကစားစရာ။ ဈေးကတော့ သူ့ခေတ်နဲ့သူ အတော်ကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ကစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ်အကြိုက်ကြီး မဟုတ်ဘူး။
ကျွန်တော် မမှတ်မိတော့တဲ့ လောဓလေ့ အိမ်နီးချင်း သူငယ်ချင်းဟောင်းက တစ်လောက ကျွန်တော့်ကို ပြန်ဆက်သွယ်လာတဲ့အခါ ကျွန်တော့် မက်ခယ်နိုနဲ့ သူကစားခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေ အားပါးတရ ပြန်ပြောတာ ကြားလိုက်ရသေးတယ်။ ကျွန်တော် သိပ်စိတ်မ၀င်စားလှပေမယ့် မရှိလို့ ကစားခဲ့ရတဲ့ ကစားစရာဟာ တခြားသူ တစ်ယောက်အတွက်တော့လည်း လွမ်းစရာ ဖြစ်နေပါတယ်။
ကျွန်တော် ဘာလိုချင်လဲဆိုတာကို တစ်ချက်ကလေး မမေးဘဲ ကျွန်တော်နဲ့ သင့်တော်မယ်လို့ သူတို့ ယူဆ ဆုံးဖြတ်တာနဲ့ပဲ ကစားခဲ့ရတာပါ။
အဲတော့ ဘ၀ကို မကျေနပ်လှတဲ့ စိတ်ကလေးက ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ တဖြည်းဖြည်း အုံကျင်းဖွဲ့လာပါတယ်။ မန္တလေးမှာ ကျောင်းသွားနေရင်းနဲ့ အတန်းဖော်တွေ၊ ကျောင်းသွားကျောင်းပြန် လမ်းတွေပေါ်က လူတွေရဲ့ နေမှု သာယာတဲ့ ဘ၀တွေကို မြင်တွေ့နေရတဲ့အခါ ကိုယ့်ဘ၀ဟာ အဟုတ်မဟုတ်လှမှန်း ပိုပြီး ရိပ်စားမိလာခဲ့ရပြန်တာပေါ့။
ဆေးရုံ ဆေးခန်းများနဲ့ ကျွန်တော်
အဲ… ပြောရင်းနဲ့ ငယ်ငယ်တုန်းက ဆေးခန်းသွားခဲ့ရတာလည်း ပြန်သတိရလာတယ်။ လောဓလေ့မှာတုန်းက ညို့သကျည်းမှာ အနာစိမ်းပေါက်လို့ အစိမ်းခွဲ ခွဲတာ၊ သေလုအောင် နာလှတာကို ရေးတေးတေးသာ မှတ်မိပါတော့တယ်။ လူမှန်း သူမှန်း နည်းနည်းသိမှ လောပိတ ဆေးရုံကို ရောက်ခဲ့တာ အဲဒီ့တစ်ကြိမ်ပဲလို့ ထင်ပါတယ်။
မန္တလေးမှာတော့ နေမကောင်း ထိုင်မသာဖြစ်ရင် ၈၃ လမ်းပေါ်က ဆေးခန်းတစ်ခန်းကို သွားရတယ်။ ရှားမီး မုန့်တိုက် (အခုတော့ ဘာခေါ်လဲ မသိဘူး)ရဲ့ မြောက်ဘက်နား အရှေ့ဘက်တန်းက ဆေးတိုက်ပါ။ အဲဒီ့ ဆေးတိုက်က ဆရာဝန်ကြီးက ကုလားကြီးပါ။
အဲဒီ့ခေတ်က ဗမာဆရာဝန် ရှားပါးပါသေးတယ်။ အိန္ဒိယက ဆရာဝန်တွေပဲ များတယ်။ အဲဒီ့ ဆရာဝန်ကြီးကလည်း မျက်နှာထားက တည်တည်နဲ့၊ တစ်စက်ကလေးမှ မဖော်ရွေဘူ။ ပြီးရင် ဆေးထိုးပြီ။ ကျွန်တော် သိပ်စိတ်ညစ်တာပဲ။ အခုထက်ထိ ကျွန်တော်က ဆေးထိုးအပ်ဆို ကြောက်တုန်း။ ဒါ့ကြောင့် မူးယစ်ဆေးကို ကြိုက်ပေမယ့် အကြောထဲ ထိုးတဲ့အဆင့်ကို တစ်ခါဆို တစ်ခါမှ စမ်းတောင် မစမ်းခဲ့တာ။
အဲဒီ့ဆေးခန်းက မှောင်တောင်တော်လေးရယ်။ လူမှ နေမကောင်းပါဘူးဆိုမှ ဆရာဝန်စောင့်ရတာလည်း စိတ်ညစ်။ ပြီးတော့ ဆေးထိုးခံရ။ တော်တော့်ကို စိတ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်။
အမေတို့ကလည်း ထစ်ခနဲရှိ အဲဒီ့ဆေးခန်းပဲ သွားကြတာ။ ကျွန်တော့်မှာ အဲဒီ့ ဆေးခန်းကို တစ်သက်လုံးမှ နှစ်ခါလား၊ သုံးခါလား ရောက်ဖူးတယ်၊ ဆေးခန်းဆို ရွံ့ကို သွားတော့တာပဲ။
တစ်လောက ဘန်ကောက်က သာသနာပြုဆေးရုံတစ်ရုံမှာ ဆရာဝန် နှစ်ယောက်နဲ့ ပြခဲ့တာနဲ့တော့ ကွာလိုက်တာ။ ဆရာဝန်တွေက ပြုံးချို ကြည်ရွှင်လို့။ ချိုသာလို့။ ကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေကွဆိုတဲ့ အပေါက်မျိုးတွေနဲ့ မသယ်နိုင် မပိုးနိုင် မျက်ခွက် မဟုတ်ဘူး။ ဆေးရုံဆိုတာလည်း လင်းလို့၊ ထိန်လို့၊ သန့်လို့ ပြန့်လို့။ ဆေးရုံထဲမှာ တင် ကော်ဖီဆိုင်တွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ သာသာယာယာ။ သူနာပြုတွေ၊ ဧည့်ကြိုတွေကလည်း ချေချေငံငံ။
သြော်… လူတွေ သည်လို နေကြပါလားလို့ မှတ်သားခဲ့ရသေးတယ်။
စာရေးတာ အရမ်းတော်တာပဲနော်။ ငါးတန်းကနေ ကလေးဘ၀ ပြန်ရောက်သွားလိုက်၊ လက်ရှိ လူကြီးဘ၀ ရောက်လိုက်နဲ့၊ ဖြစ်ချင်တိုင်းကို ဖြစ်နေတော့တာ။ အခုလို သည်းခံဖတ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ သည်စာကြောင်းကို ဖတ်နေတဲ့သူတွေ အသက်ရှည်၊ ကျန်းမာ၊ အစာဝ၊ အနာကင်း၊ ဘယာရှင်းကြပါစေ။ (သည်စာကြောင်းကို မဖတ်ကြသူတွေ တာဝန်လက်ပတ် ပတ်ထားသူတွေနဲ့ တစ်နည်းနည်း ညားကြပါစေလို့ မဆိုလိုဘူးနော် 😛
Hlaing Su Khin မျှော်
Oakker Seithu 480 မီတာဆိုတာ လွဲနေသလိုပဲ ၊.ကိုက်တောင်မှ ၁၇၅ ပဲရှိတာကို
Saw Zar Li တိုးလို့ တန်းလန်းကြီးနဲ့ ရပ်သွားတယ် ဆရာ… စာလုံးရေကျော်သွားလို့ များလား
ATK ကျေးဇူးပါ Ka Oakker. ဘယ်လိုက ဘယ်လို အဲဒီ့ဂဏန်းရသွားမှန်းတောင် မမှတ်မိဘူး။ ပြင်လိုက်ပါပြီ။ အစအဆုံး သေချာ ပြန်ဖတ်ပေးနော်
ကျေးဇူးပါ Daw Saw Zar Li. ဘိုဖိတွားမှန်း မတိဝူးဂျ။ တင်တုန်းက အပြည့်ပဲ။ အခုပြောမှ ပြန်ကြည့်တော့ တိုးလို့တန်းလန်းကြီး ဖိနေတယ်။ အခု ထပ်ဖြည့်လိုက်ပါပြီ။ အစအဆုံး သေချာ ပြန်ဖတ်ပေးဦးနော်
အဲ… မရဘူးဗျ။ ကြည့်ရတာ သည်နေ့တင်တာကို ပုံထည့်လိုက်မိလို့နဲ့ တူတယ်။ ပုံစာကျတော့ အကန့်အသတ် ရှိပုံပဲ။ ဒါ့ကြောင့် မန္တလေး နိဂုံးကို နက်ဖြန်မှ အစအဆုံး ဆက်တင်ပါတော့မယ်။ ဆောရီးပါ။
Oakker Seithu သုံးလုံး အတိတ်ပေးနေတာဖြစ်မယ်
Thet Chow ဟင်နက်ဖြန်ဆို မန္တလေး ကပြီးပြီ ဒါဘဲလား။အမျိုးတွေ အကြောင်း ထပ် စဉ်းစားပြီး ရေးပါအုံး။ အထွန့်တက်တယ် မထင်ပါနဲ့ ကောင်းလွန်းလို့ပါ။ ပြီးအဲဒီ အင်္ကျီဖြူ၊ ဘောင်းဘီဖြူဝတ်ထားတဲ့ဟာက ဘယ်သူလဲ။ အ တယ်ပြောလည်း ခံရမှာဘဲ။
ATK ပြီးပြီဆိုပေမယ့် ခေါင်းထဲ ပြန်ပြန်ပေါ်လာရင် ဖောက်ဖောက်ရေးသွားမှာပါလေ။ မပူလင့် ဂျစ်တငယ်ဂျင်း
Thet Chow တော်ပါသေးရဲ့ မျှော်လင့်လျှက်
Lutha Kyaw ငယ်ငယ်တုန်းက Meccano ကို တော်တော် ခုံခုံမင်မင် ဆော့ခဲ့ဖူးတာ သတိရမိတယ်။ Baygo ဆိုတဲ့ အုတ်နံရံပုံစံတွေ၊ အမိုးပုံစံတွေ၊ သံချောင်းလေးတွေနဲ့ တိုက်ဆောက် ကစားတာလည်း သဘောကျတယ်။
May Thandar Win ဆရာရေ ဆရာ လေးလေးမြင့် ခေါ်တာနဲ့ တစ်ခုသိချင်သွားတယ်။ မန္တလေးက သမီးတို့ အမျိုးတွေလည်း အဒေါ်တွေ ဦးလေးတွေကို လေးလေးတပ်ခေါ်ကြတယ်။ သမီးကတော့ ရန်ကုန်မွေးဆိုတော့ အန်တီတို့ ဘာတို့ပဲ ခေါ်တာ။ လေးလေးက ယောကျာ်းပဲဖြစ်ဖြစ် မိန်းမဖြစ်ဖြစ် တပ်ခေါ်လို့ရသလား။ သမီးငယ်ငယ်က ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ မောင်မောင်ဇာ ကာတွန်းထဲမယ် လေးလေးဇာလို့ အမွှာနှစ်ယောက်က ခေါ်ကြတော့ စိတ်မှာဦးလေးကိုပဲ ခေါ်လို့ရတယ်ထင်နေတာ။ တလက်စတည်း ဘကြီး ဘဒွေး ဦးလေး ဦးကြီးစတဲ့ အထက်ဘက်က အခေါ်အဝေါ်တွေကိုလည်း ဗဟုသုတ ပြောပြပါလားဆရာ။ နောက်ပြီး မန်းလေးက ခြင်တွေအကြောင်း။ ဆရာငယ်ငယ်က ခြင်သိပ်မပေါသေးဘူးထင်တယ်နော်။ အိမ်တံခါးတွေ ဒီအတိုင်း ဖွင့်ထားပြီး ညကျမှ ပိတ်တယ်ဆိုတော့။
ATK Atta Kyaw ဆိုတဲ့ ရူးကြောင်မူးကြောင်တစ်ယောက် အဲဒီ့အမျိုးစပ်ပုံတွေ တင်ထားတာ နှစ်ရက်ပဲ ရှိသေးတယ်ဗျ။ သွားဖတ်ကြည့်နော်
မန္တလေးနိဂုံးပြီးတဲ့နောက် ကျန်သွားတာတွေထဲက ဖြည့်ရမှာက မစီမာရယ်၊ သူ့အိမ်ဘေးက အော်စီဆရာမကြီးဆီမှာ အင်္ဂလိပ်စာသင်ခဲ့ရသေးတာရယ်။ မမေ့အောင် သည်မှာ လာမှတ်ထားတာ Thet Mar ရေ…
May Thandar Win atta kyaw ထဲမယ်လား..
ATK သည်ပို့(စ်) အောက်က မန့်တွေထဲမှာ…
May Thandar Win ဒါဆိုလည်း ခြင်အကြောင်း မှတ်မိသလောက် ထည့်ပြောပြဦးး) သမီးတော့ မန္တလေးအမျိုးတွေဆီသွားရင် ခြင်တွေ သိပ်ကိုက်တာ မှတ်မိနေလို့။ အခုတော့ ရန်ကုန်ကတောင် ပိုပေါလာသလားပဲ ခြင်ဆို အင်မတန်မုန်းတာ
ATK ခြင်တော့ မမှတ်မိဘူး။ ရန်ကုန်မှာကျမှ ခြင်ကိုက်ခံရတာ စူးစူးဝါးဝါး။ အထူးသဖြင့် သည်အသက်ပိုင်းမှာ။ ခြင်က စိတ်ညစ်နေတဲ့သူဆို မကိုက်ဘူး။ စိတ်ချမ်းသာနေတဲ့သူဆိုရင် ကိုက်တယ်။ ကိုယ်က ထွက်တဲ့ enzyme သဘောကြောင့်။ အတည်ပြောတာနော်။ အဲဒါကြောင့် မန်းလေးတုန်းက ခြင်ကိုက် သိပ်မခံခဲ့ရတာလား မသိဘူး။
May Thandar Win ဟဟဟားး ဒီလိုလား.. သမီးဆို အတူတူထိုင်နေရင်တောင် ခြင်က ကိုယ့်ပဲကိုက်တာ။ သမီးကို ခြင်အင်မတန်ကြိုက်တာ။ အခု ဆရာပြောသလိုဆို သမီးက အမြဲစိတ်ချမ်းသာနေလို့ထင်တယ်
ATK ဟုတ်လောက်တယ်။ ဂျစ်တူဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတာဆိုတော့ ကိုယ့်ဖသာ ပီတိဒေဖြာနေတာ တစ်ရပ်လုံး တိဂျဒါဗျဲအေ
May Thandar Win ခစ်ခစ် ထင်လို့ပါ ဒီမလဲ ပုထုဇဉ် ပီပီ ရုန်းရကန်ရ ဘဝ အမောတွေ နဲ့ စိတ်တွေ ညစ်ရတာတွေရှိပါ့
၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၉ ရက်
ငါးတန်းကျောင်းသားဘ၀မှာ ကျွန်တော်ဟာ ကျောင်းတက် ကျောင်းဆင်းကို ကိုယ့်ဘာသာ တစ်ယောက်တည်း လမ်းလျှောက်သွားခဲ့ရင်းကနေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု စတင်ရရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်သလို အဲသလို သွားတတ် လာတတ်ပြီဆိုတာကိုလည်း ကျွန်တော့်မိဘနှစ်ပါး အပါအ၀င် လူကြီးတွေက ယုံကြည်သွားကြတယ်ဆိုတာ အခုအခါမှာ ပြန်စဉ်းစားမိလာပါတယ်။
ကျောင်းပိတ်ရက်ကျရင်တော့ ဦးကြီးကိုကိုတို့ ဆိုင်ထွက်တဲ့ ဈေးချိုကို လိုက်သွားရတယ်။ အိမ်ကိုတော့ ပိတ်ထားခဲ့ကြတာပေါ့။ ဈေးသွားရင် ပျော်ပေမယ့် ကားဝါစီးရတာကိုတော့ စိတ်ညစ်တယ်။ နောက်တစ်ခု စိတ်ညစ်တာက ဦးကြီးကိုကိုက ရှေ့က ခြေလှမ်းကျဲကျဲနဲ့ သွားတာ။ ကြီးကြီးက နောက်က သုတ်သုတ် သုတ်သုတ်နဲ့ လိုက်ရတာ။ ဘယ်တော့မှ ယှဉ်မလျှောက်ဘူး။ ကျွန်တော်က ဦးကြီးကိုကိုရဲ့ ခြေလှမ်းကို အမီလိုက်ရတယ်။ စိတ်ထဲက ကြီးကြီးကို အားနာနေမိတယ်။
ဈေးချိုရောက်ရင်တော့ သူတို့ဆိုင်မှာ ထိုင်၊ စာဖတ်။ မမသန်းဆိုင် သွားထိုင်ပေါ့။ ရုံက တစ်ရုံတည်း ဆိုတော့လည်း သည်လိုပဲ ကူးသန်းပေါ့။ မမသန်းဆိုင်ရောက်ရင် လက်ဖက်ကလေး ဘာလေး စားရတယ်။ အရီးတောင်း လက်ဖက်ပေါ့။
နောက်ပြီးတော့ ကြီးကြီးရဲ့ တူမတွေ။ သူတို့က ရှိုးကောင်းကောင်းနဲ့ ကြည့်ကောင်းတာကို မှတ်မိတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲတော့ ချောတဲ့ အစ်မကြီးတွေပေါ့။ တကယ် ချောမချော အခု ပြန်မြင်ယောင်ကြည့်တော့ ရေးရေးတောင် မပေါ်တော့ဘူး။ သူတို့တွေနဲ့လည်း ပြောဆို ရင်းနှီးခဲ့တာ အနည်းအပါးမှတ်မိတယ်။
အပြာစာအုပ်တွေ ကောင်းကောင်း ဖတ်ပင် ဖတ်ဖူးနေပြီးဖြစ်သော်ငြားလည်း အဲလိုမျိုးတွေကျပြန်တော့ ကျွန်တော့် စိတ်က ဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန် မရှိသေးဘူး။ ငယ်လွန်းသေးတာကြောင့် ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။
တစ်နှစ်တာဟာ သည်လိုနဲ့ပဲ ကုန်လွန်သွားပြန်တယ်။
ငါးတန်းကျောင်းတွေ ပိတ်တော့ ရထားကြီးစီးပြီး ရန်ကုန်ကို ချီတက်ခဲ့ပါတယ်။ အဖေက ရန်ကုန်ကို ပြောင်းဖို့ လျှောက်တာ ရခဲ့ပြီလေ။ မန္တလေးက ထွက်လာတော့ ကျွန်တော့်ရင်မှာ ဆို့နင့်နေခဲ့တယ်။ မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်လည်း ကျနေတယ်။
ကျွန်တော်က မန္တလေးကို ချစ်တယ်၊ မန္တလေးမှာပဲ နေချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်မှာ ပြောရေးဆိုခွင့် မရှိဘူး။ ကျွန်တော် ဘယ်မှာနေချင်လဲလို့လည်း ဘယ်သူကမှ မမေးကြဘူး။ သည်လိုနဲ့ပဲ အဖေခေါ်ရာနောက်ကို လိုက်ပါခဲ့ရပါတော့တယ်။
ရန်ကုန်အလာ လမ်းမှာ မှတ်မိနေတာ တစ်ခုကတော့ မေမေ့ဆီမှာ ပါလာတဲ့ ၀တ္ထုစာအုပ်တစ်အုပ်ကို စွဲစွဲမက်မက် ဖတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဘာစာအုပ်လဲ၊ ဘယ်သူ့ဝတ္ထုလဲတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ၀တ္ထုရှည် ဖတ်ရတဲ့ အရသာ အပြည့်ကို စတင်သိရှိခံစားနိုင်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်ဆိုတာတော့ မှတ်မိနေတယ်။ အရင်က တွေ့သမျှ ဖတ်ပေမယ့် သိပ်အရသာ မခံတတ်၊ နားမလည်တတ်ခဲ့ဘူး။ သည်တစ်အုပ်ကျတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ စီးမျောတတ်လာတယ်၊ အရသာတွေ့လာခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန်ရောက်တော့ ရေကျော်ရပ် ၀တ်ကျောင်းလမ်းနဲ့ မြောင်းကြီးလမ်းထောင့် အိမ်နံပါတ် ၁၃ ရဲ့ အပေါ်ထပ် ဘယ်ဘက်ခန်းလေးမှာ နေရတယ်။ သားအမိ သားအဖ သုံးယောက်တည်း ရှိတာမို့ ၁၂ ပေ၊ ပေ ၅၀ လောက် ရှိတဲ့ အခန်းလေးက နေလောက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူဖြစ်ကတည်းက မန္တလေးနဲ့ လောပိတတို့မှာ နေခဲ့ရတဲ့ အိမ်တွေက အဲဒီ့အိမ်ခန်းထက် အများကြီးကျယ်လွင့်တာမို့ အခန်းလေးက စိတ်ထဲမှာ ကျဉ်းကျဉ်းကျုတ်ကျုတ်လေး။
ရန်ကုန်ရောက်ရောက်ချင်း ခံစားရတဲ့ ဒုက္ခက ရေသောက်လို့ မရတာ။ အဲဒီ့အထိ တစ်လျှောက်လုံး ရေစိမ်းပဲ သောက်လာခဲ့ကြတာ။ လောပိတမှာတုန်းကလည်း ရေစိမ်းပေမယ့် အိမ်မှာက ဂျပန်တွေရဲ့ လက်ကျန် ရေစစ် မြေအိုးဆန်ကာပြွန် အဆင့်ဆင့်နဲ့ စစ်တဲ့ စနစ်ကို တပ်ဆင်ထားတယ်။ မန္တလေးအိမ်မှာတော့ ကျုံးရေက တစ်ဆင့်လာတဲ့ အိမ်က ရေကန်ထဲက ရေကို ပိတ်ရေစစ်နဲ့ စစ်ပြီး သောက်ကြတယ်။
ရန်ကုန်ရေက အဲတုန်းက သန့်ရှင်းသေးတယ်လို့ ဆိုရမယ် ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အနံ့က မကောင်းဘူး။ ဂျိုးဖြူကန်က ရေကို ရေသန့်စင်ဖို့ ဆေးခတ်ထားတာမို့ ဆေးနံ့ (ကန့်နံ့ထင်တယ်)က ထောင်းထောင်း ထနေတယ်။ အရသာကကျတော့လည်း ဘယ်လိုကြီးမှန်း မသိဘူးပေါ့။
ကျွန်တော်တင် မဟုတ်ဘူး၊ အမေနဲ့ အဖေပါ အဲဒီ့ ဒုက္ခမခံစားနိုင်တာမို့ အဲဒီ့ရေကို ပွက်ပွက်ဆူအောင် တည်၊ အအေးပြန်ခံပြီး အဲဒီ့ ရေကျက်အေးကိုပဲ သောက်ခဲ့ကြတော့တာ ကနေ့ ရေသန့်ပုလင်းတွေ ပေါ်လာတဲ့ အထိပါပဲ။
အဲဒီ့ ၀တ်ကျောင်းလမ်းအိမ်မှာ အဆင်မပြေတာက တိုက်ခံအိမ် ဖြစ်တဲ့အတွက် အပေါ်ထပ်ကာ ပျဉ်တွေနဲ့ ကာထားတာပါ။ အဲတော့ ဟိုဘက်ခန်း သည်ဘက်ခန်း အသံစုံ ကြားနေရပါတယ်။
ဟိုဘက်ခန်း (မြောင်းကြီးလမ်းဘက်အခန်း) မှာက အိမ်ရှင်မိသားစု နေတယ်။ သူတို့မိသားစုက ဘုစုခရုတွေနဲ့ ဆိုရင် လေးငါး ဆယ်ယောက်ရှိတယ်။ ပွက်လောကို ရိုက်လို့ပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ အောက်ထပ်က ပုံနှိပ်စက်။ ပုံနှိပ်စက်က ဆေးနံ့တွေ၊ ရေနံဆီနံ့တွေ အမြဲရပါတယ်။
အိမ်ကို စပေါ် ငါးထောင်၊ အိမ်လခ ငါးဆယ်ပေးပြီး ငှားထားတာပါ။
အဲဒီ့အိမ်မှာ အဆင်မပြေဆုံး၊ စိတ်ညစ်စရာ အကောင်းဆုံးကတော့ အိမ်သာပါပဲ။ ရေလောင်း အိမ်သာ နှစ်လုံး ရှိပါတယ်။ အဲဒီ့ နှစ်လုံးက အောက်ထပ်မှာ ရှိပြီး အခန်းလေးခန်းက မျှသုံးရတာပါ။ စဉ်းစားသာ ကြည့်ပါတော့ဗျာ။ အခုခေတ်တောင် အိမ်သာသွားပြီးရင် ကိုယ့်ကိစ္စကိုယ် တာဝန်ယူပြီး နောက်လူအတွက် ငဲ့ညှာကာ သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ထားခဲ့ရကောင်းမှန်း သိတဲ့ ဗမာဆိုတာ အတော် ပါးရှားနေဆဲမို့ ဟိုခေတ်ကဆို မပြောပါနဲ့တော့။ ကျွန်တော်လည်း စိတ်ညစ်၊ အဖေတို့၊ အမေတို့လည်း စိတ်ညစ်ပေါ့။
အဲတုန်းက ဆောက်လုပ်ရေး ၀န်ကြီး ကတော်က အမေနဲ့ တစ်နွယ်ငင် တစ်စင်ပါ အသိမိတ်ဆွေထဲကမို့ အစိုးရ တိုက်ခန်းလေးများ ရမလားဆိုတဲ့ အမြော်အမြင်နဲ့ အဖေတို့ သွားအကူအညီတောင်းခဲ့ပါသေးတယ်။ အဖေက အဲဒီ့အချိန်မှာ ဓာတ်အားပေးရေး လုပ်ငန်းက အစိုးရ ၀န်ထမ်းမို့ ဘောင်လည်း ၀င်ပါတယ်။ ဟိုကလည်း ကူညီ ရှာပါတယ်။ ရန်ကင်းတိုက်ခန်းပေးမယ်ဆိုတော့ အဖေက အမြော်အမြင် ကြီးကြီးပဲ၊ မယူခဲ့ဘူးခင်ဗျ။
သူလိုချင်တာက မြို့လယ်က နိုင်ငံခြားပြန်တွေရဲ့ ပြည်သူပိုင် သိမ်းထားတဲ့အခန်းမျိုးတွေ။ အဲဒါမျိုးတွေက အဖေ့လို စာရေး ဘယ်ကပ်နိုင်မှာတုံး။ အနည်းဆုံး ပြန်တမ်းဝင် အရာရှိ အဆင့်လောက်မှ ကပ်နိုင်တာမျိုး။
ပေးကားပေး၏ မယူဆိုတော့လည်း ဟိုကလည်း မပေးတော့ဘူးပေါ့။
အဖေကလည်း ကျွန်တော့်အတိုင်းပဲ၊ ကိုယ့်ဘ၀မှန် ကိုယ်သိပ်သိတာ မဟုတ်ဘူး။ အမြင့်ကြီး တယ်မှန်းချင်တာကလား။
အဲ… ကျွန်တော့်စိတ်တွေ ဖောက်ပြန်ပုံ ရေးရပါဦးမယ်။
ရန်ကုန်ရောက်တော့ လောဓလေ့ကို လာလည်ဖူးတဲ့အပြင် အဖေနဲ့ ကျွန်တော် ထီဆုငွေ ထုတ်ဖို့ ရန်ကုန်လာတုန်းက ဘဲ(လ်)အဲ ကား တ၀ီဝီနဲ့ ရန်ကုန်မှာ လိုက်ပို့ပေးတဲ့ အန်ကယ်ကြီးကလည်း အမြဲ လာလည်ပါတယ်။ သူ့အိမ်ကိုလည်း ခေါ်ခေါ်သွားပါတယ်။ သူ့နာမည်ကို အန်ကယ် ဦးအောင်ဆွေလို့ပဲ ထားလိုက်ရအောင်ပါ။
အဲ… ရေးရင်းတန်းလန်းနဲ့ အဲဒါ ခဏထားခဲ့ပြီး ထီဆုငွေ ထုတ်ဖို့ လာတုန်းက ကြုံခဲ့တဲ့ အဖြစ်ကလေး တစ်ခု ပြန်သတိရလို့ ဖောက်လိုက်ပါရစေဦး။
အဲဒီ့အချိန်မှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းစ လူပျို အင်ဂျင်နီယာ နှစ်ယောက်က လောဓလေ့က ကျွန်တော်တို့ အိမ်မှာ ထမင်းလခ ပေးပြီး စားနေပါတယ်။ အဲဒီ့နှစ်ယောက်မှာ တစ်ယောက်က တော်တော် အဆင့်အတန်း ရှိတဲ့သူပါ။ စကားပြော နူးညံ့ချိုသာ သိမ်မွေ့ပါတယ်။ အပြုအမူ ယဉ်ကျေးပါတယ်။ မေမေက သူ့ကို ကိုယ့်သားသမီးရင်းလို သိပ်ချစ်ပါတယ်။
အဲဒီ့ အင်ဂျင်နီယာရဲ့ မိဘနှစ်ပါးက ရန်ကုန်မှာ ရှိပါတယ်။ သူ့အဖေက ဗိုလ်မှူးပါ။ သူ့အမေက တက္ကသိုလ် ကထိကပါ။ အဲဒီ့အိမ်ကို ဘာလို့လဲ မသိဘူး၊ ရန်ကုန်ရောက်တုန်း အဖေက သွားပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ပါသွားတာပေါ့။
တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းပေါ်က တက္ကသိုလ်ကထိကတွေကို ပေးထားတဲ့ ခြံဝင်းကျယ်ကြီးနဲ့ နှစ်ထပ်အိမ်ကြီးပါ။ အထဲကို ၀င်သွားတော့ ခမ်းနားလှတာကို မြင်ယောင်နေမိသေးတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ရှယ်ခမ်းနား နေတာပေါ့။
အဲဒီ့ အန်ကယ်ကြီးနဲ့ အန်တီကြီးကလည်း ဖော်ဖော်ရွေရွေ ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင် ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပါပဲ။ ကျွန်တော့်ကို (ခက်(ဒ်)ဘာရီထင်တယ်) ချောကလက် တစ်ပြား ထုတ်ကျွေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဖြတ်သန်းရတဲ့ဘ၀က ချောကလက် ပါးရှားတဲ့ ဘ၀ပါ။ မှတ်မှတ်ရရ လွိုင်ကော် ရုပ်ရှင်ရုံမှာလား မသိဘူး၊ အဖေတို့က တစ်ခါ ၀ယ်ကျွေးလို့ စားဖူးတယ်။ အဲလောက်ပဲ။
အဲဒီ့အိမ်မှာ ထိုင်နေရင်း ကျွန်တော် အပေါ့သွားချင်လာပါတယ်။ အဖေ့ကိုတောင် မပြောတော့ဘဲ အိမ်ရှင် အန်ကယ်ကြီးကို တိုက်ရိုက် ပြောလိုက်ပါတယ်။ အန်ကယ်ကြီးက တဟားဟားရယ်ရင်း အတွင်းခန်းကို ပို့ပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပြောရဲဆိုရဲတဲ့ သတ္တိကို ချီးကျူးလို့ မဆုံးတော့ပါဘူး။
ပြောချင်တာက အဖေကို တုန်နေအောင် ကြောက်ရပေမယ့် ကျွန်တော့် အငုပ်စိတ်မှာ အမှားမဟုတ်လို့ကတော့ ရဲရဲ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ဇကလေး ခိုင်ခိုင် ရှိနေတာကို သုံးတန်းကျောင်းသားအရွယ်၊ အသက် ရှစ်နှစ် ကိုးနှစ်ကတည်းက ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းပါ။
အဲဒါပြီးတော့မှ ကျွန်တော့်စိတ် ဖောက်ပြန်ပုံတွေ ပြန်သွားပါ့မယ်။
တိတ်တိတ်ကျိတ် ပြစ်မှားဖူးသူ (၁) (ကျွန်တော့်အစုတ်ထုပ် နောက်တစ်ထုပ်)
မန္တလေးမှာ ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစားဘ၀နဲ့ နေရင်း အပြာစာအုပ်တွေနဲ့ ယဉ်ပါးခဲ့တာ ရေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ အဲတော့ အရွယ်မတိုင်ခင်မှာကတည်းက ကျွန်တော့် ရာဂစိတ်များ နိုးကြားနေခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန် မရောက်ခင် အထိကတော့ ရုပ်ရှင် မင်းသမီးတွေ၊ အင်္ဂလိပ်မဂ္ဂဇင်း အဟောင်းတွေထဲက အမျိုးသမီးပုံတွေလောက် ကြည့်ပြီး စိတ်ကစားခဲ့တာပဲ ရှိပါတယ်။ အပြင်က လူအကောင်လိုက်ကို စိတ်ဝင်စားတာ ကျွန်တော် မှတ်မိသလောက် မရှိသေးဘူး။
ဖြစ်တာကလည်း အဲဒီ့ အန်ကယ်ဦးအောင်ဆွေရဲ့ ဇနီးကို။ အန်ကယ်ဦးအောင်ဆွေက သူဌေးသား၊ အင်ဂျင်နီယာပါ။ သူက အင်ဂျင်နီယာပေမယ့် ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ပါဘူး။ သူက အသက်ကြီးမှ အိမ်ထောင်ကျပါတယ်။ သူ့ဇနီးနဲ့ သူနဲ့က အသက်ချင်း ဆယ်နှစ်လောက် ကွာတယ် ထင်တယ်။
သူ့ဇနီးက တကယ့်ဖြူဖြူချောချော တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့် အမျိုးသမီးပါ။ ကျွန်တော် စတင်မြင်ဖူးချိန်ကဆို အသက် အစိတ်ကျော်လောက်ပဲ ရှိပါဦးမယ်။ ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ခင်သန်းနုထက်တောင် ချောပါသေးတယ်လို့ ပြောရင် ပိုတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပေမယ့် တကယ့်ကို ချောတာပါ။ မနှိုင်းကောင်း နှိုင်းကောင်း အခုခေတ် လူငယ်တွေ မျက်စိထဲ မြင်လွယ်အောင် ပြောရရင် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ရင်လပ်(ခ်) ရှင်နာဝါထြာလို မျက်နှာပေါက်မျိုးနဲ့ ဂျနီဖှာ လိုပက်(ဇ်)ရဲ့ ကိုယ်လုံးမျိုးနဲ့ပါ ခင်ဗျား။ ဒါတောင် သူက အဲဒီ့အချိန်မှာ ကလေးတစ်ယောက် မွေးပြီး နေပြီ။
မဖြစ်သင့်မှန်းလည်း သိပါတယ်၊ မပြစ်မှားကောင်းမှန်းလည်း သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ဗျာ။ ဘယ်လိုမှ ထိန်းမရဘူး။ ကျိတ်ပြစ်မှားနေမိတော့တာပေါ့။
သူ့နာမည်ကို အန်တီ သီတာလို့ပဲ ထားလိုက်ကြရအောင်ပါ။
ရန်ကုန်ရောက်စမှာတော့ အဲဒီ့ အန်ကယ် ဦးအောင်ဆွေ လင်မယားနဲ့ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုက အင်မတန် လုံးခဲ့ကြပါတယ်။
နောက်ပိုင်းကျတော့ မေမေ့ ညည်းသံ ကြားလာရတယ်။ အန်တီသီတာက စီးပိုးတယ်လို့ မေမေက ပြောပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်တွေ ဘာတွေ အတူ သွားကြရင် မေမေကချည်းပဲ ထုတ်ရှင်းရတာမို့ပါ။ သူ့ဘက်က ဆယ်ခါ့ရံ တစ်ခါတောင် မရှင်းဘူးတဲ့။
အန်တီသီတာ့ဆီက ရလိုက်တဲ့ စားနည်းတစ်ခုကိုလည်း ဝေမျှ ပါရစေဦး။
အဲဒါကတော့ မုန့်ဟင်းခါးစားပြီးတဲ့နောက် ပဲကြော်နဲ့ အစာပိတ်တာပါ။ ပဲကြော်တစ်ယှက်ကိုယူ၊ ပြီးတော့ ငံပြာရည် ဆမ်း၊ ငရုတ်သီးမှုန့်ဖြူး၊ သံပရာရည် ညှစ်ပြီးစားတာခင်ဗျ။ အတော်ကောင်းပဲ။ မစားဖူးသေးသူတွေ စမ်းကြည့်လို့ ရပါတယ်။ ပဲကြော်က ရွလေ၊ စားလို့ ကောင်းလေပါခင်ဗျား။
အန်တီသီတာရော အန်ကယ်ဦးအောင်ဆွေရော ဖော်ရွေကြပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုလည်း လူရာသွင်းပြီး ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆက်ဆံပါတယ်။
အဲဒီ့အချိန်က ဦးအောင်ဆွေဟာ သူ့ညီ ညီမ လူပျို အပျိုတွေနဲ့ရော၊ သူ့အိမ်ထောင်နဲ့ပါ ပေ အစိတ်၊ ပေတစ်ရာ ရှိတဲ့ တရုတ်တန်းဘက်က အပျံစားတိုက်ခန်းကျယ်ကြီးမှာ နေပါတယ်။ သူ့ညီညီမတွေက ကျောင်းသားတွေပါ။
အန်ကယ်ဦးအောင်ဆွေဆီကတော့ စာကျက်နည်း ရခဲ့ပါတယ်။ စာကို မှန်မှန်ကျက်ထား။ စာမေးပွဲဖြေခါနီး သုံးနာရီအလိုဆို လုံးဝ မကျက်နဲ့တော့။ တခြား စိတ်ဝင်စားတာ တစ်ခုကို လုပ်နေ။ ၀တ္ထု ဖတ်ချင်ဖတ်၊ ကစားချင် ကစား။ စာမေးပွဲ သွားဖြေရင် ဘာစာအုပ်မှ ယူမသွားနဲ့တော့၊ စိတ်ကို အေးအေးထားပြီး ဖြေ။
အဲဒီ့နည်းပါ။ ကျွန်တော့် တစ်သက်တာလုံး စာမေးပွဲဖြေသမျှမှာ အဲဒီ့နည်းကိုပဲ ကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်။ တကယ်လည်း အဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျ။ နီးမှ ပျာယာပျာယာနဲ့ ကောက်ကျက်နေလို့က တကယ်က ခေါင်းထဲ ဘာမှ မ၀င်တော့ပါဘူး။ အဲသလို တွန်းရင်းနဲ့ စိတ်ကလည်း ပိုခြောက်ခြားလာနိုင်ပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့တော့ သူ့နည်းက အံကိုက်ပေါ့ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ ခေတ်တုန်းက မေးခွန်းပေါက်ကြားတာတွေ၊ ခိုးချတာတွေ မရှိဘဲ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတစ်ခုလုံးကို ကျေညက်မှ ဖြေနိုင်တာမျိုးမို့ စာတကယ် မကျေရင် စာမေးပွဲ အောင်စရာ အကြောင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ အဲတော့ ကိုယ့်စာကိုယ် အထိုက်အသင့်ကျေညက်နေရင် ပြီးရောပေါ့။ ဖြေချိန်နီးမှ ကပ်တွန်းနေလည်း တွန်းတွန်းပဲ ရှိတော့မှာပါ။
ညဆိုလို့ မဟုတ်တာ မတွေးနဲ့ဗျ။ အဲဒီ့ညခင်းက အန်ကယ်ဦးအောင်ဆွေတို့အိမ်မှာ ကြာဆံဆီချက် လုပ်စားခဲ့တာကို မမေ့တာပါ။ ငတ်နေလို့လားတော့ မသိဘူး။ အဲဒီ့ကြာဆံဆီချက်က ဘ၀မှာ စားဖူးသမျှ ကြာဆံ ဆီချက်ထဲမှာ အကောင်းဆုံးလို့တောင် ညွှန်းလို့ရပါတယ်။ ကြက်သွန်နီ၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ဆား၊ သံပရာရည်နဲ့ နှပ်ထားတဲ့ အချဉ်ကလေးကအစ ကောင်းတာပါ။
ကံကောင်းချင်တော့ ကျွန်တော့်သမီးရဲ့ လက်ရာ ကြာဆံဆီချက်ကလည်း ထူးရှယ်ခင်ဗျ။ အချဉ်လည်း အလားတူပဲ။ အခုကျတော့ အဲတုန်းက အန်တီသီတာ့လက်ရာကို ကျွန်တော် ပြန်စားနေရပါပြီ။
ATK Ma Bow နော်… ဖတ်လည်း ဖတ်ဘဲနဲ့ လာ like နေတယ် 😛
Taurarians Bow ဖတ်နေတုန်း ဦးလေးရ အရင် လိုက်ခ်ထားလိုက်တာ 😀 😀 😀
ATK လူမိဒါ နာဒကွာ 😀
Like တာလော့ လာ like နေဂျဒါဗျဲ။ ဘာဒေ like နေဂျမှန်းလည်း မတိဝူး။ အားနာလို့၊ မိတ်မပျက်ချင်လို့ like နေဂျဒါများလား။ အားငယ်လာဘီနော်။
ဘာပုလို့ like တယ်ဆိုတာလေး တစ်ကြောင်းလောက် ရေးဖို့တောင် ပျင်းကြတာများ ကျွန်တော့်အတိုင်းပဲ။ ကိုယ်ချင်းစာဘာရယ် အိုတငယ်ဂျင်းးးးး
Saw Zar Li ကြာဆံ ဆီချက်စားချင်လို့like တာ 😛
ATK အိုက်လိုလုပ်ပါအေ 🙂
Oakker Seithu ဒါမျိုးလေး ထပ်သောက်ချင်လို့ Like လုပ်တာ ဟိဟိ
ATK ဟေ့ရောင်… ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့လေ… သတိထားဟ
Oakker Seithu ဟီး… ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်တွေရဲ့ အမျိုးသားတွေပိုသောက်သင့်တယ်ဆိုလားပဲ ဟိဟိ။ စိစိ ကတော့ ပါမစ် ပိတ်သွားရှာပြီ 😀
ATK နိုးဘာ… မူးမူးနဲ့ မတော်ဒါဒွေ ဖိကုန်နိုင်ဒဲ့အတွက် ဗိုက်ကြီးသည့်လင်ဒေလည်း ပါမစ် ချမပေးဒေါ့ဘူး။ ရုတ်ရုတ်ရုတ်ရုတ် မလုပ်နဲ့နော်… စိစိကို တာဝန်လက်ပတ်နီ ထုတ်ပေးလိုက်မယ်။ 🙂
ATK ကွန်မန့်ကို လာလိုက်သွားတဲ့ Daw Hnin Hmon Thet ဆိုသူ သိသာရန် ထိုမန့်ကို ရေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ 😛
May Thandar Win ဆရာ ဒေါက်ခင်မောင်ဝင်း အသည်းရေးတဲ့ အမေ စာအုပ် ရန်ကုန်မန္တလေးအစုန်အဆန် ရထားစီးပြီး ထမင်းထုပ်တွေ ဝယ်စားကြတာ ကနေ ဘယ်လ်ဂျီယမ်က push cafe ဆီရောက်သွားတာ ခုန်လိုက်ပေါက်လိုက်ရေး လှပြီထင်တာ ဆရာနဲ့ ကျမှ လက်လန်သွားတယ် ဟီး။ ဒါပေသိ ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။ ဒေါက်ခင်မောင်ဝင်း အသည်းလိုလည်း မကြွားဘူး 🙂
စု စုအေး အသည်းကြီးကတော့ ကြွားလွန်းပါတယ်တော်
May Thandar Win ကြွားနိုင်တာပေါ့နော် မြန်မာပြည်မယ် အရက်ကလည်း ဈေးပေါ ဝယ်ချင်တိုင်းလည်း ဝယ်ရဆိုတော့ 🙂
စု စုအေး အစစ်ပဲ
ATK ဟင်းးးး ဟင်းးးးး ကြွားဂျင်ဇိတ်ကို မနည်း အောင့်ထားရတာ။ 😛
တကယ့်တကယ်ကျတော့ သများဘ၀မှာ တူ့လို ကြွားဇာလည်း ဘာဆို ဘာမှ မချိချာဘာဝူးလေ… ကြောရင်းနဲ့တောင် ညက်ရေဒေ ထွက်ချင်လာဘီ 🙂
Nge Thar ဒီတစ်ခါတော့ လျှာရည်ကျရင်း စောင့် ငင့် 😛
Ei Yupar Win မအားပေးမယ့် အခန်းဆက်ဝတ္တုရှည်လိုပဲ စွဲပြီး ဖတ်ဖြစ်နေပါတယ် ဆရာရေ။ ဒါနဲ့ မြို့လယ် နဲ့ မြို့လည် မှားနေတယ် ထင်တယ်နော်။
ATK ကျေးဇူးပါ မယ်အိ။ အမြဲမှားနေကျ။ အခု ပြင်လိုက်ပြီ။ 🙂
Sanda Hlaing ငန်ပြာရည်လေးလည်းးး မှားနေပါတယ် အူးးးအူးးးးဆရာ… ငံပြာရည်ပါရှင့်… 🙂 😛
ATK ငှင့်… ငံဒါလားးးး ပြင်လိုက်မယ်။ စာလုံးဒေချည်း မပြောကြနဲ့ကွယ်။ ပြန်ရှာရတာ ပန်းပင်တယ်။ အပိုဒ်ပါ ပြောပေးကြရင် ပိုကောင်းမယ်(စ်) 😛
Sanda Hlaing အဲဒါကတော့ မုန့်ဟင်းခါးစားပြီးနောက်….. ဘလာာာာ ဘလာာာာ … အဲ့အပိုဒ်… 🙂
ATK ကျေးဇူးဘာ(စ်)။ ပြင်ပြီးဘာဂျောင်း(စ်)။ သည်စာမူက သတ်ပုံ အစင်ဆုံးဖြစ်မှာ။ ပိတ်သတ်ကြီးကပါ ၀ိုင်းစစ်ပေးထားဂျလို့(စ်) 😛
Sanda Hlaing အူးးးးအူးးးးဆရာ အလုပ်ချိန်တွင်းးး အွန်လိုင်းပေါ်ရောက်နေတာ… အလုပ်ပင်ပန်းနေဦးမယ်… ခွီစ်…
ATK အလုပ်မချိန်ဘူးဗျ။ ကနေ့ ထမင်းစားချိန်က အားရပါးရ တစ်နာရီခွဲမက ပေးထားလို့။ ၁း၄၅ မှ ပြန်စမယ်။ ကျုပ် ဟစိလိုက်နေတာ ကြည့်ပြီးများ တနားတွားဂျလား မတိဝူး 🙂
၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၁၂ ရက်
အခုရက်ပိုင်း အလုပ်ကလေးကလည်း များနေ၊ ရွှေပြည်ကြီးက ကျက်သရေယုတ်မှုတွေကြောင့် စိတ်ကလေးကလည်း ထွေနေလို့ ကျွန်တော့် အဟောင်းထဲက အစုတ်ထုပ်ကို ဆက်မတင်ဖြစ်ဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။
အခုနေ တင်မယ်ဆိုရင် ဖတ်ချင်ကြပါရဲ့လားခင်ဗျား။
ဒီမိုခလေစိ နည်းကျအောင် သဘောထား တောင်းခံတာပါနော်။
Shin Shin Aung Htun သ ဘော ရှိ မ နော ရှိ အာစိ
Ko Kyi Win မြော်လင့်လျက်ပါ ဆရာ
Khin Myo ဖတ်ချင်တာပေါ့
Win Maung လောလောဆယ်တော့အားသေးဘူးဗျ ..ဒါပေမယ့် ဆရာစိတ်ပါရင်တော့ရေးထားလိုက်ပါဗျာ… 😀
Saw Zar Li ဆရာအတ္တကျော်ကို ဝန်းရံကြ 😀
ATK ဖျား ဖျား
Sandar Tin ဆက်ဖတ်ချင်ပါတယ်ဆရာ။
December Nyein ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိလိုက်ထှာာာာ ဖတ်ချင်ပါတယ်ဗျို့…
Hlaing Su Khin သဘောတူကြောင်းပါ…
Soe Myat Myo Shwe မညိုမြပါနဲ့ဆရာရေ
ATK မြပါရစေဟယ်… 😛
Wei Phyo Maung တို့ဆရာလည်းပိတ်သတ်ကြီးရဲ့စိတ်ဆန္ဒအမှန်သိရအောင်ခေတ်နဲ့အညီစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့သင့်တယ်
Rita Aung NY ဖတ်ချင်ပါတယ်ဆရာ. အားရင်ဆက်ရေးပါအုံး
ATK တင်ထားကြောင်းပါ Daw Rita ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဗျာ
Nantsuu Suu လက်တွေဘောဘဲချာ ဆောတီး လက်တွေဘဲဆက်ရေးပါအုံး
Thet Chow A big yes
တိတ်တိတ်ကျိတ် ပြစ်မှားဖူးသူ (၂) (ကျွန်တော့်အစုတ်ထုပ် နောက်တစ်ထုပ်)
အန်တီသီတာပြီးတော့ ကျွန်တော့်စိတ်ကို လွှမ်းမိုးသူက အန်တီခင်ခင်ပါ။
သူကကျတော့ မေမေ့ မိတ်ဆွေ မန္တလေးသူပါ။ မေမေ့မိတ်ဆွေဆိုပေမယ့် မေမေ့ထက် ၆ နှစ်၊ ၇ နှစ်လောက်တော့ ငယ်မယ် ထင်ပါတယ်။ သူကလည်း ရန်ကုန်ရောက်စ မေမေ့ကို ကူညီပေးတဲ့အနေနဲ့ အိမ်ကို ၀င်ထွက်နေပါတယ်။ သူတို့အိမ်ကိုလည်း တစ်ခါတလေ သွားပေါ့။ သူတို့က ကျောက်မြောင်းဘက်မှာ နေပါတယ်။ သူ့သမီးက ကျွန်တော့်ထက် တစ်နှစ်လောက်ငယ်ပြီး သူ့သားက ကျွန်တော့်ထက် နှစ်နှစ်လောက် ကြီးပါတယ်။
အဲဒီ့အန်တီက အန်တီသီတာ့လို မျက်နှာပြောင်နဲ့ မဟုတ်ဘူး။ မိတ်ကပ်ကို အမြဲတစေ လူးပြီး ပြင်ဆင် ခြယ်သ ထားတတ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာက သူ့အောက်နှုတ်ခမ်း ထူထူတွဲတွဲတွေပါ။ နောက်ပြီးတော့ သူ့ ကိုယ်လုံးပါ။ သူ့ကိုယ်လုံးက အန်တီသီတာ့ထက်တောင် ထွားပါသေးတယ်။ အန်တီသီတာက အချိုးအဆက်ကျတယ်။ တင်ကားတယ်။ ရင်က သိပ်မထွားဘူး။ အန်တီခင်ခင်ကကျတော့ တင်ရော၊ ရင်ပါ တော်တော် ဖွံ့ဖြိုးပါတယ်။
စိတ်က အဲဒီ့ အန်တီ့ခင်ခင်အပေါ်လည်း ဖောက်ပြန်နေခဲ့ပါတယ်။
သည်အပိုင်းကို “တိတ်တိတ်ကျိတ်ပြစ်မှားဖူးသူ (၂)”လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့အတွက် (၃) တွေ (၄)တွေကိုတော့ မမျှော်ကြပါနဲ့တော့။ ဘာလို့ဆို နောက်ပိုင်းမှာ မရေမတွက်နိုင်အောင် များပြားလာတော့လို့ပါ။ တချို့ဆို မှတ်တောင် မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ 🙂
ကျွန်တော် မောင်တင်ချစ် (အစုတ်ထုပ် နောက်တစ်ထုပ်)
အပြာစာအုပ်တွေရဲ့ တန်ခိုးကြောင့်လား၊ မွေးရာပါ ဗီဇလားတော့ မသိဘူး။ ကျွန်တော်က အမျိုးသမီးတွေရဲ့ တင်ကို အလွန် စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ကျွန်တော့် အာရုံကို အနှိုးဆွနိုင်ဆုံးက အဲဒီ့ တင်ပါ။
မတင်လှသာဖြစ်၊ ပျိုပျိုအိုအို ကျွန်တော် ငမ်းမိတတ်ပါတယ်။ အဲဒါ အခုအရွယ်အထိပါ။ အဲသလောက်ကို ကျွန်တော်က အမျိုးသမီးတွေရဲ့ တင်ကို စွဲလန်းတတ်သူပါ။ (မနေ့က လေယာဉ်မယ်လေးရဲ့ တင်ဆိုလည်း မျက်စိထဲကို စွဲနေတယ်။ သူနဲ့ ဆုံတာ နှခိရှာ၊ နှစ်ခါရှိနေပြီ။ ဒါပေမယ့် မျက်နှာကို မမှတ်မိဘူး။ တင်ကို မြင်တော့မှ သူပါလားလို့ ပြန်သတိရသွားတာ။ အဲသလို။) ကျွန်တော့်နာမည်တောင် “မောင်တင်ချစ်”လို့ ပြောင်းရင် ကောင်းမလား မသိဘူးနော်။ 😛
ကျွန်တော့် အိမ်ထောင်ရေး ပြင်ပ ဟိုးလေးတကြော် အရေးအခင်းတွေမှာလည်း မတင်လှက နှစ်ယောက် ပါပါသေးတယ်။ (အသေးစိတ်ကို “ချစ်သူ့ရင်ခွင်ရှာပုံတော်”မှာ ဖတ်ရှုတော်မူကြပါ။) ဒုတိယ တစ်ယောက်ဆို ကျွန်တော်သာမဟုတ်၊ အစ်ကို ကာလသားတိုင်း တက်တခေါက်ခေါက် ရှိလောက်အောင် သူ့တင်ရဲ့ ဖမ်းစားနိုင်အားက အစွမ်းထက်လှပါတယ်။
သို့သော်လည်းတဲ့ပေါ့ဗျာ… တကယ် တကယ်တဲ့အခါကျတော့ ထင်သလောက် မတကယ်ပါဘူး။ အဲဒါကို ကျွန်တော့်အိမ်သူကို ပြန်ပြောပြတော့ ကျွန်တော့်အိမ်သူက ရယ်ပါတယ်။ ရယ်တယ်ဆိုတာထက် ကျွန်တော် မောင်တင်ချစ်ကို အားပါးတရ ဟားတာပါ။ မှတ်ပလားပေါ့…
ဟဲ… ဟဲ… မှတ်တာလည်း မှတ်တာပေါ့ဗျာ။ ငမ်းတာလည်း ငမ်းမိတုန်းပဲ ခင်ဗျ။ ၀ါသနာဘာဂီ ဆက်တိုင်းမှီလို့ ဆိုသမို့လားဗျာ။
မိတ်ဆွေအမျိုးသမီးများခင်ဗျား၊ တစ်လက်စတည်း မှာလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ၊ ကိုယ့်တင် မလှလို့ကတော့ ကျွန်တော့် ရှေ့မှာ စိတ်လုံလုံနဲ့ ကြိုက်သလို နေနိုင်ပါတယ်။ အဲ… နည်းနည်းပါးပါး လှရင်တော့ ကျွန်တော် ငမ်းနေတာကို မသိချင်ယောင်ဆောင်နေပြီး တယ်လှတဲ့ ငါပါလားလို့ ပီတိများသာ ပွားများတော်မူကြပါကုန်။ 🙂
အဲ… ကျွန်တော်က ကိုတင်ချစ်ဖြစ်ပေမယ့် ယူထားတဲ့ မိန်းမကျတော့ မတင်လှ မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ အပျိုတုန်းကတော့ သူလည်း သူ့ဟာနဲ့သူတော့ လှတာပေါ့ဗျာ။ ကလေးနှစ်ယောက်လည်း မွေးပြီးရော တဖြည်းဖြည်းရှုံ့ရှုံ့သွားတော့တာများ အခုဆို မတင်မဲ့လို့တောင် ပြောင်းမှည့်ရမတတ်ပဲ။ သို့ပေမယ့် သူက သရက်သီးမျိုးပါလေ။ သိတယ်မဟုတ်လား၊ သရက်သီးဆိုတာ ဖင်ရှုံ့လေ… ပိုချိုလေလဗျာ 🙂
မင်္ဂလာပါ ဆရာ၊ အလေး…. ပြု
ရန်ကုန်မှာ ကျွန်တော့်ကို ကျောင်းအပ်တော့ အထက ၆ ဗိုလ်တထောင်မှာ အပ်ပါတယ်။ စိန်ပေါကျောင်းလို့ နာမည်ကြီးခဲ့ဖူးတဲ့ ကျောင်းပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းရောက်တော့ ကျောင်းအုပ်ကြီးက စစ်ဗိုလ်။ ဗိုလ်ကြီး ဗဟိန်းတဲ့။ ဆရာတွေကို မင်္ဂလာပါလို့ ပြောရင်း အလေးပြုရတာပ။
အဲဒီ့ခေတ် စိန်ပေါကျောင်းသား၊ အဲလေ… ထ ၆ ဗိုလ်တထောင် ကျောင်းသားတွေဟာ ဆရာမြင်ရင် အပြင်မှာဖြစ်တောင် ပုံမကျ ပန်းမကျ အလေးပြုတဲ့ အကျင့်ဆိုးကြီး စွဲကုန်ကြရှာတယ်။ ဗိုလ်ကြီး ကျောင်းအုပ်လုပ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးပေါ့ဗျာ။
ကျောင်းကနေ အိမ်ကို ခြေလျင် လျှောက်သွားရတယ်။ မဝေးလှပါဘူ။ မန္တလေးတုန်းက နေ့စဉ် အသွားအပြန် ၁၈ ပြ လျှောက်ခဲ့သူအနေနဲ့ ရေကျော် ၀တ်ကျောင်းလမ်းကနေ သိမ်ဖြူလမ်းနဲ့ ဗိုလ်အောင်ကျော် (မဟုတ်ဘူး၊ အဲတုန်းက စပတ်လမ်း (Spark’s Street) လို့ပဲ ပါးစပ်ထဲ စွဲတာ။ သိမ်ဖြူလည်း လာမလုပ်နဲ့၊ ကိုယ်တို့က ဂျူဒါ အစ်ဇီကယ်ပဲ။) ကြား၊ ဖရေဇာ (Fraser, အခု အနော်ရထာ) လမ်းပေါ်က ၀င်ပေါက်အထိ တွက်မှ နှစ်ပြခွဲလောက်ရှိတာ။ အေးဆေးပေါ့။
နာမည်တွေ လျှောက်ပြောင်းတာ ဘာအကျိုးထူးသလဲ။ အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကထက် တိုင်းသူပြည်သားတွေ ပို အနေချောင်၊ အစားချောင်အောင်၊ တိုင်းပြည်စီးပွားရေး ပိုကောင်းအောင် လုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့ ထားပါတော့ဗျာ။ အခုတော့ အင်္ဂလိပ်ခေတ်ထက် ဘက်ပေါင်းစုံမှာ အဆပေါင်း တစ်သောင်းမက အောက်ကျနောက်ကျနိုင်နေပြီး နာမည်ကျမှ မျိုးချစ်စိတ်တွေ နင်းကန် ထက်မြက်ပြနေတာ ဘာများ အရာရောက်လို့တုန်း။ ကျွန်တော်ကတော့ ခပ်တင်းတင်းပဲ၊ ရှေးနာမည်ပဲ ခေါ်မယ်။ မကျေနပ် လဲသေ။
ကျောင်းတင်မက မြို့ထဲတစ်ခွင်တော့ ခဏနဲ့ ကျွန်တော်က သွားတတ်လာတတ်နေပြီ။ သွားလည်း သွာနေပြီ။
သဘောကျတာက အခုမရှိတော့တဲ့ မြို့မရုံတို့၊ သွင်ရုံတို့ရဲ့ ဆင်ဝင်အောက်က လမ်းဘေးဈေးပဲ။ အဲဒီ့မှာ တစ်လက်မလောက် ရှိတဲ့ ဗမာရုပ်ရှင်မင်းသမီး အဖြူအမည်း ဓာတ်ပုံတွေ ချရောင်းတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ ပိုက်ဆံလေး ရှိသလောက် ခင်သန်းနုပုံ၊ ဖျာပုံမယ် တင်တင်အေးပုံလေးတွေ ၀ယ်တာပေါ့။ ၀ါဝါ၀င်းရွှေက အဲဒီ့အချိန်မှာ နာမည်ကြီးပေမယ့် သူ့တော့ မကြိုက်ပေါင်။ တင်မရှိ၊ ရင်မရှိနဲ့ဟာ။ 😛
တစ်ရက်မှာ ဆူးလေဘုရားလမ်းဘက် ရောက်သွားရင်း မာမီရယ်၊ ရှာပေးကွယ်၊ ရီးစားလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ သီချင်းကို ကြားလိုက်တယ်။
မန္တလေးဘ၀မှာ ပြောဖို့ ကျန်ခဲ့တာက မန္တလေးမှာ နေရင်း ငယ်ငယ်ကတည်းက တအားကြိုက်ခဲ့တဲ့ ၀င်းဦးကို ပိုစွဲလမ်းလာခဲ့တာပဲ။ အဲဒီ့ခေတ် မန္တလေး တစ်မြို့လုံးကလည်း ၀င်းဦးကို သည်းသည်းလှုပ်အားပေးတဲ့ အမာခံ ပရိသတ်။ ကျွန်တော်ကလည်း ၀င်းဦးကို သဘောကျလှပြီ။
အဲဒီ့ ရီးစားလိုချင်တယ်ကို ကြားလိုက်တော့ ၀င်းဦးဆိုတယ်လို့ ထင်လိုက်တာ။ အသံက ၀င်းဦးသံကိုး။ သည်သီချင်း ကျွန်တော်လည်း မကြားဖူးဘူး။ ဒါနဲ့ သီချင်းသံလာရာကို စူးစမ်းလိုက်တော့ ရစ်(ထ်)(ဇ်) (Ritz) ရုံ အောက်မှာ ရှိတဲ့ ဘီအာ(ရ်)စီ ရေဒီယို၊ ဓာတ်စက်၊ ထိတ်(ပ်)ရခေါ့ဒါ ပြင်ဆိုင်ကာ ဖွင့်ထားတာ။
[ရစ်(ထ်)(ဇ်) ဆိုတာ ထုံးစံအတိုင်း ရွှေဖြစ်ဖြင့် မရှိဘဲ နာမည်ပြောင်းတာကို အထုံပါသူများရဲ့ ကျေးဇူးနဲ့ နောင်ကျတော့ ရဲရင့်ရုံဖြစ်၊ ဗမာတွေ စွတ်ဆန်ခဲ့ရာက အခုတော့ ဗမာအလွန်ဆန်လှတဲ့ နာမည်နဲ့ ဆခုရ မျှော်စင် အဆောက်အအုံကြီး ဖြစ်နေတဲ့ နေရာပေါ့ဗျာ။ ယူတတ်ရင် ဘာဝနာပေါ့နော်။ သူ့လိုပဲ ဖယ်လယ်ဒစ်ယယ်(မ်) (Palladium)တို့၊ Globe တို့ကိုလည်း ဇာတိမာန်တွေ ပြတဲ့ပြီး ပပ၀င်းတို့၊ ဂုဏ်တို့ ပြောင်းခဲ့။ ဟော… ခုကျတော့ ဗမာအလွန်ဆန်လှတဲ့ နာမည်နဲ့ ဆူးလေ ရှန်ဂရီလာကြီးဖြစ်လို့။ အဟွတ်… ရယ်လိုက်ရတာ ဖတ်ဖတ်မော၊ ရင်ဘတ်နောက်ကကျော… ခွိ(စ်)]
စကားစပ်လို့ ပြောရဦးမယ်။ အဲဒီ့ခေတ်က ရန်ကုန်ဟာ သူ့အဆင့်နဲ့သူ နေတဲ့မြို့။
ရစ်(ထ်)(ဇ်)ရုံက ကုလားကားတွေပြတယ်။ ကုလားကားမှ ကုလားကားပဲ။ ဘောလီးဝု(ဒ်)လို့ ခုခေါ်တဲ့ အိန္ဒိယ ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းက ထုတ်လုပ်တဲ့ ကားတွေပဲ ပြတာ။ ရုပ်ရှင်ပြီးချိန် သွန်ကျလာတဲ့ ပရိသတ်ကိုက အနံ့တစ်မျိုး။
ဂလို့(ဘ်)နဲ့ ခါ(လ်)ထန် (Carlton, ရွှေဖြစ်မရှိသူတွေ နာမည်ပြောင်းတော့ ယုဇန၊ အခုကျတော့ ဗမာဆန်ဆန်လေး ဆယ်(န်)ထရယ်(လ်)လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ ဟိုတယ်ရဲ့ ၃၂ လမ်းဘက်ထောင့်)က အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ (စကားပြော နားလည်မှ အရသာ ခံနိုင်မယ့်) အင်္ဂလိပ်ကား ကောင်းကောင်းလေးတွေ ပြတာ။ ရုပ်ရှင်ပြီးလို့ ဆင်းလာတဲ့ ပရိသတ်ကို ကြည့်ရင် လူရည်သန့်တွေချည်းပဲ။ ပရိသတ်နံ့က တစ်မျိုး။
ဖယ်လယ်ဒစ်ယယ်(မ်)နဲ့ ပရဲဆစ်ဒယ့်(န်)(ထ်) (President) (အခု သမ္မတရုံ)က blockbuster လို့ ခေါ်တဲ့ ပေါက်ကားတွေ ပြတာ။ အဲဒီ့မှာတော့ ဒီစီ (Dress Circle, အပေါ်ထပ် အထူးတန်း)နဲ့ စထော(လ်) (Stall, အောက်ထပ် နောက်ပိုင်း ရုပ်ရှင်ကို အောက်ထပ်ကနေ ကြည့်လို့ အကောင်းဆုံးနေရာ)က ထွက်လာတဲ့လူဆို လူရည်သန့် လူကုန်ထံတွေပဲ။ စထော(လ်)ရှေ့မှာ ဈေးပေါတဲ့ နှစ်တန်း ရှိသေးတယ်။ အဲဒါက လူလတ်တန်းစားနဲ့ မိလက္ခုများ ကြည့်တဲ့တန်းတွေ။ အတန်းချင်းမှာတင် အနံ့ချင်းကွာတယ်၊ အ၀တ်အစားချင်း ကွာတယ်။ အဲလို။
မြန်မာကားသစ်တွေက လိုက်(ထ်)ဟောက်(စ်) (အခု ရှေ့ဆောင်) ရုံနဲ့ နေပြည်တော်ရုံတို့မှာ ပြပါတယ်။ နေပြည်တော်မှာက ပေါက်ဖော်ကားတွေလည်း ပြခဲ့တယ်လို့ သိရပေမယ့် ကျွန်တော် ရန်ကုန်ရောက်ချိန်မှာတော့ ပေါက်ဖော်တွေခမျာ ၁၉၆၇ အရေးအခင်းကြောင့် နောက်တန်းမှာ ကုပ်ကုပ်ကလေး နေနေကြရလို့လား မသိဘူး၊ ပေါက်ဖော်ကားတွေ မမြင်ရတော့ဘူး။
သည်ဘက်မှာက အစ်(ခ်)ဆယ်(လ်)ဆစ်ယာ (Excelsior) (နောက်ပိုင်းကျတော့ ၀ဇီရာ)ရှိတယ်။ အဲဒါက ၁၉၆၈ ကျွန်တော် ရန်ကုန်ရောက်ချိန်မှာ ပိတ်ထားတယ် ထင်တယ်။ နောက် ဘုရင့်ရုံလို့ ခေါ်တဲ့ King’s Cinema က ဘားလမ်း (Bar Steet) ထောင့်မှာပါ။
ဘားလမ်းဆိုတာက ရှေ့နေရှေ့ရပ်များ လမ်းလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ယနေ့ထက်တိုင် မြန်မာနိုင်ငံ တရားရုံးချုပ် ရှေ့နေများကောင်စီတို့၊ ရှေ့နေအသင်းတို့ဟာ အဲဒီ့ ဘားလမ်း အောက်ဆုံးလမ်းမှာ ရှိသလို ရှေ့နေရုံးခန်းတွေလည်း အောက်လမ်းမှာ တစ်လမ်းလုံး ပွထနေတဲ့အပြင် ယခင် တရားလွှတ်တော်ချုပ်ကြီးကလည်း အောက်လမ်းအလယ်မှာ ကျယ်ကျယ်ပြောပြော ထည်ထည်ဝါ၀ါ ရှိနေခဲ့တာမို့ နေရာဒေသနဲ့ အလွန် လိုက်ဖက်တဲ့ နာမည်ပါ။
ဒါပေမယ့် ရွှေဖြစ်မရှိသော်လည်း နာမည်ပြောင်းတာ အထုံပါသူများကတော့ ခေါ်လို့ လွယ်တဲ့ ဘားလမ်းကို မဟာဗန္ဓုလ ပန်းခြံလမ်းရယ်လို့ ရှည်လျားလှတဲ့ နာမည်ကို ပြောင်းခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။ မရောင်ရာဆီလူးရင်း တိုင်းပြည်ကြီးကို ချောက်ထဲက ကယ်တင်သူများရဲ့ အ၀ီစိပို့လမ်းစဉ်ပါပဲ။
တော်ပြီဗျာ။ ဆက်ပြောရင် နိုင်ငံရေးတွေ ပါကုန်လိမ့်မယ်။
အဲဒီ့ ရစ်(ထ်)(ဇ်)ရုံနားမှာ နှစ်ခေါက်သုံးခေါက် ပြန်လျှောက်ရင်း သေချာနားထောင်တော့ ၀င်းဦးဆိုထားတာ မဟုတ်ဘူး။ ၀င်းဦးနဲ့ အသံချင်းဆင်တဲ့ တခြားတစ်ယောက် ဆိုထားတာလို့ သိလိုက်ရပါတယ်။
ရယ်ရတာက အဲဒါကို အီစွတ်ဆိုတဲ့ ကုလားဆိုတာလို့လည်း နောက်ပိုင်းမှာ ကြားသိရပြန်တယ်။
တကယ်က မဟုတ်ဘူး။ သည်သီချင်းကို ရေးလည်း ရေး၊ ဆိုလည်းဆိုသူက တက္ကသိုလ်ထွန်းနောင်ရယ်လို့ အဲဒီ့နောက် တစ်နှစ်၊ နှစ်နှစ်အတွင်းမှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက် ကျော်ကြားလာသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၆၈ ခုနှစ်မှာ အဲဒီ့သီချင်းကို ကြားခဲ့တာတော့ သေချာပါတယ်။ မြန်မာပြည် စတီရီယိုလို့ ခေါ်တဲ့ ခေတ်ပေါ် ဂီတလောကရဲ့ အစအဦးပေါ့။
သည်နေရာမှာလည်း ဂီတလောကအကြောင်း ကျွန်တော် သိမီသလောက် ပြောဖို့ လိုလာပြီ ထင်ပါတယ်။
မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ ထုံးစံအရ တစ်နေရာကို ရောက်သွား၊ နေရာရသွားရင် ငါသိ၊ ငါတတ်၊ ငါနဲ့မတူ ငါ့ရန်သူ၊ ငါနဲ့မတည့် မပါရ၊ ငါသာလျှင် အကုန်လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားမယ်ဆိုတဲ့ စရိုက်တွေက အဲဒီ့ခေတ်က မြန်မာ့ အသံမှာလည်း ပြခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့အတွက် အပြင်မှာ အောင်မြင် လူကြိုက်များပေမယ့် မြန်မာ့အသံမှာ ဓာတ်ပြားမရတဲ့ အဆိုတော်တွေ အများကြီး။
တစ်ပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ထိုးဖောက်နိုင်ဖို့က အဲဒီ့အချိန်မှာ မြန်မာ့အသံကိုပဲ အားကိုးနေကြရတာ။ မြန်မာ့အသံ ရွှေခေတ်ကြီးပေါ့ ခင်ဗျာ။
ခေတ်က ဓာတ်ပြားခေတ် ကုန်လုနီးနီး။ ဓာတ်ပြားခေတ်က ကမ္ဘာမှာ မကုန်သေးတဲ့အပြင် ရွှေခတ်က နောက်ထပ် ဆယ်နှစ်မက ရှိနေခဲ့ပေမယ့် ဗမာမှာတော့ ဗိုလ်နေ၀င်းရဲ့ တုနှိုင်းမမီတဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်မြတ်ကြောင့် အစစအရာရာ ပါးရှား၊ နိုင်ငံခြားသွင်းကုန်တွေ အပိတ်ခံရ၊ လူတကာရဲ့ စီးပွားတွေပျက်၊ တိုင်းပြည်ကြီး ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေတဲ့ခေတ်မှာ နိုင်ငံခြားနည်းပညာကို အားကိုးနေရတဲ့ ဓာတ်ပြားခေတ်ကြီးက ယိုင်ထွက်လာတော့တဲ့အချိန်ပါ။
ဓာတ်ပြားခေတ်တုန်းက တောရော မြို့ပါ ဓာတ်စက်သုံးကြသေးတယ်။ ဓာတ်ပြားခေတ် ယိုင်နဲ့လာတော့ ဓာတ်ပြားကုမ္ပဏီတွေ အခက်ပွေကြတယ်။ အဲဒီ့မှာ ဟင်္သတ ဆန်ရောင်းဝယ်ရေး ဓာတ်ပြားကုမ္ပဏီလည်း ပါတယ်။ သူ့မှာက ဆန်ကလည်း တားမြစ်ကုန်ဖြစ်တော့ ဆန်ရောင်းဝယ်ရေးလည်း ဆက်လုပ်လို့ မရ၊ ဓာတ်ပြားကလည်း ခေတ်ပျက်တော့ ကြံရာမရ။ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်က သူဌေးသား အကော်ဒီယံ အုန်းကျော်။
ဂီတကိုလည်း သူက လွှတ်ဝါသနာကြီးတာ။ မင်းသားကလည်း လုပ်ချင်လိုက်သေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန်ကို အဖေ့ထီဆုငွေထုတ်တုန်းက သူ့ရဲ့ မြေလတ်သူ ဇာတ်ကား ရုံတင်နေတာကို ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။
အကော်ဒီယံအုန်းကျော်ကို မြန်မာ့အသံက ဓာတ်ပြားမပေးဘူး။ နေရာမပေးဘူး။ အသံမအောင်ဘူး၊ ဘာဘူး ညာဘူး အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ပေါ့ဗျာ။
အဲတော့ ဟိုဆရာကြီးက စိတ်ပေါက်လာတယ်နဲ့တူတယ်။ တိတ်ခွေနဲ့ သူ့စတူဒီယိုမှာတင် သူ အသံသွင်းပြီး ဖြန့်တယ်။ အလကား ဖြန့်တာ ထင်ပါရဲ့။ ပိုက်ဆံယူလည်း အဲဒီ့ခေတ်မှာ ဘယ်သူကမှ ပေးမှာမှ မဟုတ်တာလေ။
အဲတော့ သူက သူထင်တဲ့ သီချင်းတွေ သူ့ဘာသာ သီဆို အသံသွင်းပြီး ထုတ်တယ်။ ကျွန်တော် ပထမဆုံး စကြားဖူးတာက Fistful of Dollars ဆိုတဲ့ အမေရိကန် အနောက်ပိုင်း နွားကျောင်းသား ဇာတ်ကားက ဇာတ်ဝင် သီချင်းကို မြန်မာစာသားတွေ ထည့်ပြီး သူ့အသံဝါကြီးနဲ့ “ရေခြား… ဝေးမြေ… မနေမနား ပြေးနေ (ဒိုင်းညောင့်… ဒိုင်းညောင့်) ”ဆိုတဲ့ သီချင်း။
အဲဒါ မန္တလေးအိမ်တုန်းက ကြားဖူးတာဆိုတော့ ၁၉၆၇ လောက်ဖြစ်မယ်။ အိမ်မှာ ထိတ်(ပ်) ရခေါ့ဒါဆိုတဲ့ ငါးလက္မအခွေကြီးနဲ့ တိတ်ကြိုးခွေနဲ့ ဖွင့်တဲ့ စက် မရှိပါဘူး။ သို့ပေမယ့် ဦးကြီးကိုကိုက ဘယ်က ငှားလာလဲတော့ မသိဘူး။ အိမ်မှာ ရက်အတန်ကြာ ဖွင့်နေခဲ့လို့ ကြားဖူးခဲ့တာပါ။ အဲတုန်းက စတီရီယိုလို့ ခေါ်တဲ့ နှစ်ဖက်သံကြား၊ အသံအိမ်နှစ်လုံးက ထွက်တာလည်း မဟုတ်သေးဘူး။ မိုနို (Mono) လို အသံအိမ်တစ်လုံးတည်းက အကုန်ပေါင်းပြီး ထွက်လာတာပါ။
သည်တော့ အကော်ဒီယံအုန်းကျော်ကို တိတ်ခွေနဲ့ သီချင်းဖြန့်တဲ့စနစ်ရဲ့ ဖခင်ကြီးလို့ ပြောရင် မှန်နိုင်ပေမယ့် စတီရီယို ဖခင်ကြီးလို့တော့ ပြောလို့ မရဘူး ထင်ပါတယ်။ 🙂
မန္တလေးအကြောင်း ပြောတုန်းက ကျန်ခဲ့တာလေးတွေ
မန္တလေးမှာ သူငယ်တန်းလေး တက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ အဲဒါကို တစ်ယောက်က မေးတယ်။ ၄၆ ရက်သားနဲ့ လောပိတရောက်သွားပြီး ဘယ့်နှယ်က ဘယ့်နှယ် မန္တလေးမှာ ကျောင်းစနေတာတုံးတဲ့။
အဲဒါတော့ ကျွန်တော်လည်း မလျှောက်တတ်တော့ဘူးခင်ဗျ။ မှတ်မှ မမှတ်မိတော့တာကိုး။
မန္တလေး စိန့်ဂျိုးဇက်(ဖှ်) ခန်ဗှယ့်(န်)(ထ်)၊ အခု အမှတ် ၈ ကျောင်းက မေမေ နေခဲ့တဲ့ကျောင်း၊ မေမေ ဆရာမ လုပ်ခဲ့တဲ့ကျောင်း ဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်တော့်အတွက်လည်း ရင်းနှီးလွယ်တဲ့ကျောင်းပါ။
စကားစပ်တုံး ကြွားလိုက်ဦးမယ်။ မေမေ့အကြောင်း ကြွားမှာပါ။ မေမေက စာရေးဆရာမကြီး (ဒေါ်) ပတ္တမြားခင်ထက် တစ်တန်းငယ်တယ်။ ကျောင်းကျတော့ တစ်ကျောင်းတည်းပဲ။
အဲဒီ့ကျောင်းတွေ ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲဆိုရင် ဆရာမကြီးရော မေမေပါ လက်ရေး လက်သား အလွန် ကောင်းပါတယ်။ သပ်လည်း သပ်ရပ်ကြပါတယ်။
ကျွန်တော်သူငယ်တန်းတုန်းကဆိုရင် လက်ရေးကို သင်တဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ လက်ကလေးကို အပေါ်က အုပ်ကိုင်ပြီး သင်ပေးခဲ့တာပါ။ ၀တ်စုံဖြူဝတ် သီလရင်ကြီးတွေကပေါ့။ မေမေက သင်ပေးရင်လည်း အဲလိုပဲ သင်ပေးပါတယ်။
အဲ… မေမေ့အကြောင်း ကြွားမယ် ပြောပြီးမှ အဲဒါ မကြွားသေးဘဲ ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ်ကြွားပါတော့မယ်။ အဲသလို လက်ရေး သင်ခဲ့ကြတဲ့ အစဉ်အလာကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ တစ်မိသားစုလုံး လက်ရေးလှကြပါတယ်။ အဲဒါတော့ သားတော်မောင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၃-၄ နှစ်က အမှတ်မထင် ပြောလိုက်လို့ သတိထားမိသွားတာပါ။
ဟုတ်တယ်ခင်ဗျ။ ကျွန်တော့်အိမ်သူလည်း လက်ရေးလှတယ်၊ သမီးနဲ့ သားလည်း လက်ရေးလှပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်က ကလေးနှစ်ယောက်စလုံးကို အင်္ဂလိပ်စာကို စာလုံးဆက် ရေးနည်းလည်း ကျကျနန သင်ပေးထားတာမို့ သည်ခေတ် ကလေးတွေ ရေးဖို့နေနေသာသာ သိပ်တောင် မဖတ်တတ်ကြတော့တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ စာလုံးဆက်ရေးနည်းကို သူတို့ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် တတ်ကြတယ်ခင်ဗျ။
ကျွန်တော့်မိသားစုအကြောင်း ကြွားပြီးမှ မေမေ့အကြောင်း ကြွားတော့မှာပါ။
ဒေါ်ပတ္တမြားခင်က ကျောင်းသူဘ၀ကတည်းက စာရေး အလွန်ကောင်းပါတယ်။ သူရေးတဲ့ စာစီစာကုံးတွေကိုဆို အတန်းငယ်တွေအတွက် စံပြ စာစီစာကုံးများအဖြစ် နမူနာ ယူကြရအောင် နောက်တက်လာတဲ့အတန်းကို ဖတ်ပြကြ၊ ဖတ်ခိုင်းကြပါတယ်။ မေမေတို့က ဒေါ်ပတ္တမြားခင်ရဲ့ စာစီစာကုံးတွေကို ဖတ်ခဲ့ကြရသူတွေပေါ့။
အဲ… မေမေကလည်း ဒေါ်ပတ္တမြားခင်လိုပါပဲ။ သူရေးတဲ့ စာစီစာကုံးတွေကို သူ့နောက်က အတန်းက နမူနာယူရပြန်ပါတယ်။ ဖတ်ကြရပါတယ်။
အဲတော့ ကျွန်တော့် စာရေးခြင်း၊ စာဖတ်ခြင်း အမွေအနှစ်ဟာ မေမေ့ဆီက တိုက်ရိုက်ဆင်းသက်တာပါ။ ဒါ့ကြောင့် နေ့တိုင်း၊ အိပ်ရာဝင် အိပ်ရာထနဲ့ စားသောက်ချိန်တိုင်း စိတ်ထဲကနေ မိဘနှစ်ပါးအပါအ၀င် အနန္တောအနန္တငါးပါးကို ကန်တော့မြဲ ဖြစ်သည့်တိုင် သည်စာနဲ့လည်း သွားလေသူ မေမေ့ကို ထပ်မံ ကန်တော့လိုက်ပါတယ်။
အဘိုးဦးသုခ ၀င်စားတာ သေချာပါတယ်
အဲဒီ့ကျောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ အမှတ်အရဆုံးကတော့ ကျောင်းဆင်းချိန် ကျောင်းပေါက်ဝမှာ လာရောင်းတဲ့ ကုလားကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ ကုလားပဲသုပ်ပါပဲခင်ဗျ။ တော်တော် စားလို့ ကောင်းတယ်။ ရေးရင်းတောင် တံတွေးက မျိုမိသွားသေးတယ်။
စက္ကူနဲ့လား၊ ဖက်နဲ့လားမသိ ထုပ်ပေးပြီး ကော်စားဖို့ ပေးတာက လက်သုံးလုံးစာလောက် ညီညီညာညာ ဖြတ်ထားတဲ့ ထန်းရွက်ခြောက်ကလေးပါ။ အဲဒါလေးကို သတိရနေတယ်။
နောက်တစ်ခုက မစီမာ။ မစီမာရဲ့ ဆီးမဆလာနဲ့ သီးသီးပေါင်း၊ သံပရာပေါင်းဆို ကျွန်တော် သိပ်ကြိုက်တာ။ ဆီးငံပြားတော့ မကြိုက်လှဘူး။
မစီမာဆိုလို့ မစီမာရဲ့ အိမ်ဘေးက သြစတြေးလျံ အမျိုးသမီးကြီးဆီမှာ ကျွန်တော် အင်္ဂလိပ်စာ သင်ခဲ့ရသေးတယ်။ အဲဒါတော့ နည်းနည်းကြီးမှပဲ။ ငါးတန်း မတိုင်ခင်ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။ သူငယ်တန်းလေးတုန်းကတော့ မဟုတ်ဘူး ထင်တယ်။ သေချာ မမှတ်မိတော့ဘူး။ နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက် မန္တလေးပြန်ပြီး တက်ခဲ့ရတာလား မမှတ်မိတော့ဘူး။ ငယ်တာတော့ တော်တော် ငယ်သေးတဲ့အရွယ်။
ငယ်သာ ငယ်တယ်၊ ဇက မခေဘူးဗျ။ အဲဒီ့ ဆရာမကြီးရဲ့ သမီးလေး၊ ကျွန်တော်နဲ့ မတိမ်းမယိမ်း၊ ကျွန်တော့်ထက် ကြီးရင် နှစ်နှစ်၊ သုံးနှစ် အလွန်ဆုံးရှိမှာပေါ့… အဲ… အဲဒီ့ ဆရာမသမီးလေး ချောတာကိုတော့ ခုပြော ခုမျက်စိထဲ ပြန်မြင်နေသေးပါတယ်။
သေချာတယ်၊ အဘိုး ဦးသုခ ၀င်စားတာ သေချာပေါက် ဖြစ်လောက်တယ်။ လူကလေးက (လူကလေးကပဲ နေမှာပါနော်) လက်တောက်လောက်သာ ရှိသေးပေမယ့် ကောင်မလေးတွေ ချောတာတော့ အတော် မြင်တတ်နေခဲ့ပြီကိုး။
ထိတ်(ပ်)ရခေါ်ဒါဆိုတာကို မမြင်ဖူးသူတွေအတွက် ပုံလေးတစ်ပုံပါ အင်တာနက်ထဲက ရှာပြီး တင်ပေးလိုက်ပါသဗျ။
May Thandar Win အကော်ဒီယံ အုန်းကျော်က မြန်မာ့အသံကို စိတ်နာလို့ထင်တယ် နောက်ကျတော့ ‘ဒီမြေ ဟာ ငါတို့မြေ မြန်မာဘိုးဘွားတို့မြေ’ ဆိုပြီးလွှတ်ဆိုတော့တာထင်တယ်နော် ဆရာတင်ချစ် အဲလေ ယောင်လို့ ဆရာအေတီကေ (ဆရာအောင်သိန်းကျော်က ခေါ်ရတာရှည်တာ ဆရာရာ ဆရာတင်ချစ်ဆိုတဲ့ နာမည်လေး ပိုခေါ်ကောင်းတယ်။ တိုတုိုတုတ်တုတ်နဲ့ ထိထိမိမိ ရှိလှတယ် ခစ်ခစ် 😀 )
ATK ကြိုက်သလိုခေါ်ပါ မတင်မလှတလှကလေးရယ်
A rose by any other name may smell sweet, by the way!
Naing Kyaw 😀
Kyi Kyi Khin ဖလား ဖလား။
‘Song Thiri’ သာမီးတို့တော့ ဆြာနဲ့ ဆုံဖြစ်ရင် စိတ်လုံလုံနဲ့ ကြိုက်သလို နေနိုင်ပြီပေါ့လေ… 🙂
ATK ငှဲ… ငှဲ… သိပ်ကြောက်တွားဒလား မမြ၀င်းးးး အဲလေ… Daw LayKyi
Ei Yupar Win တော်သေးတာပေါ့… သရက်သီးမျိုးဆိုပြီး ကယ်သွားလို့။ မဟုတ်ရင် အရီးက ဘာပြောမယ်မသိ။
December Nyein ဇွန်သဉ္ဇာ ရဲ့ အမာခံပိတ်သတ်ဂျီးးမှန်းး အထုမှသိရယ် 😛 😀
၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၁၃ ရက်
တစ်ယောက်က မန္တလေး ခြင်အကြောင်း မပါလို့ ပြောထားတာလည်း ကျန်သေးတယ်။
အဲဒါတော့ ကျွန်တော့်အာရုံထဲမှာ သိပ်အမှတ်ထင်ထင် မရှိဘူး။ ငယ်တုန်းက ကျွန်တော့်စိတ်က တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုကြောင့် အမြဲ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေလို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘာဆိုင်လို့လဲလို့ မတွေးပါနဲ့။ ပညာရှင်တွေရဲ့ အဆိုအရ ခြင်မတွေဟာ စိတ်ချမ်းသာနေသူတွေရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာက ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ အင်ဇိုင်း(မ်)နံ့ကို နှစ်သက်တာမို့ စိတ်ချမ်းသာနေသူတွေကို ခြင်ပိုကိုက်တယ်။ စိတ်ဆင်းရဲနေသူတွေကိုဆိုရင် မကိုက်ဘူးလို့ ပြောထားတာ တစ်နေရာမှာ ဖတ်ဖူးထားပါတယ်။
ခုကျတော့ ကျွန်တော့်ကို ခြင်တအားကိုက်တာပဲဗျာ။ စိတ်ထားတတ်လာပြီကိုး။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ တော်တော် စိတ်မထားတတ်သေးတာမို့ ခြင်ကိုက်တာကို သိပ်မှတ်မှတ်ရရ မရှိဘူးပေါ့ဗျာ။
အမှတ်ရတာက မန္တလေးမှာ ညနေစောင်းရင် အိမ်တိုင်းလိုလို ဆနွင်းမှိုင်းတွေ မွှန်နေအောင် မွှေးကြတာပဲ။ ကျွန်တော်တို့ အိမ်မှာလည်း အဲလိုပဲ လုပ်ပါတယ်။ မှောင်တာနဲ့ ကြီးကြီးမခင်ရီက မီးမွှေးပြီး ဆနွင်းမှိုင်း တိုက်တော့တာပါပဲ။
ဆနွင်းမှိုင်းအပြင် လိမ္မော်ခွံကိုလည်း အခြောက်လှမ်းပြီး မီးမြှိုက်ပေးတဲ့အခါ မီးခိုးတွေ အူတက်လာပြီး ခြင်ပြေးပါတယ်။ သူ့အနံ့ကကျတော့ ဆနွင်းမှိုင်းထက် ပိုမွှေးတာပေါ့။
ကျွန်တော့်အတွက် မန္တလေးရနံ့ဆိုတာဟာ ဆနွင်းမှိုင်းနံ့၊ ဖုတ်နံ့၊ လိမ္မော်ခွံ မီးရှို့တဲ့အနံ့၊ နောက်ချေး၊ မြင်းချေးနံ့၊ ပြီးတော့ သစ်ပင်တွေရဲ့ အနံ့တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ပြည်ကလူတွေ သိပ်သိကြမယ် မထင်ဘူး။ မန္တလေးမှာ စားရတဲ့အထဲက စွဲလမ်းနေဆဲကတော့ မခမ်းပါ။ မခမ်းဆိုတာက ထောပတ်ခဲ မဖြစ်ခင် အနေအထားလို့ ထင်ပါတယ်။ တော်တော် ဆိမ့်တာပါ။ ပေါင်မုန့်ပေါ် သုတ်စားရပါတယ်။ အလွန်စားလို့ ကောင်းပါတယ်။
မန္တလေးက မေမြို့နဲ့ နီးတော့ မခမ်းပေါပါတယ်။ မေမြို့မှာက ထောပတ်လုပ်တဲ့ ဂေါ်ရခါးတွေ ပေါတာကိုး။ ၂၆ လမ်းပေါ် တောင်ဘက်တန်း၊ လမ်း ၈၀ ထောင့်နားတစ်ဝိုက်ဆီက ထောပတ်ဆိုင်လေးတွေကနေ မေမေက ၀ယ်ဝယ်ပေးပါတယ်။ အလွန်ကြိုက်ပေါ့ဗျာ။
မေမေ့လက်ကို တွဲပြီး ကျုံးဘေးမှာ လမ်းတစ်ခါ လျှောက်ခဲ့ရဖူးတာလည်း ရေးတေးတေး မှတ်မိနေတယ်။ အဲဒါလည်း တော်တော် ငယ်ဦးမယ်။ အညောင်းအညာပြေ လမ်းလျှောက်တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်ကို သွားတာလဲ မသိဘူး။ မေမေက ခေါ်သွားလို့ ပါသွားတာပါ။ အဲဒါလည်း အခုအချိန်အထိ မျက်လုံးထဲ မြင်နေမိပြန်သေးတယ်။
ဒါက မန္တလေးမှာ နေခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမှတ်တရ ပြောဖို့ ကျန်ခဲ့တာလေးတွေ ကောက်သင်း ကောက်လိုက်တာပါ။
နောက်ထပ် ပြန်မှတ်မိလာပြန်တော့လည်း ထုံးစံအတိုင်း ပြန်ဖောက်ရေးတာပေါ့ခင်ဗျာ။
ဟိုခေတ်က အိမ်ဈေး မြေဈေး
ရေကျော်မှာ နေရတာ အဆင်မပြေတော့ အမေက မေမေဘွားဘွား ပေးထားတဲ့ သူ့စိန်နားကပ်ကြီး ရောင်းလိုက်တယ်။ အိမ်တွေ လိုက်ရှာကြတယ်။
အဲတုန်းက ရေကျော်က အိမ်လေးတစ်အိမ် သွားကြည့်တာ မှတ်မိနေသေးတော့တယ်။ ပျဉ်ထောင်အိမ်ကလေး ပေအစိတ်၊ ပေခြောက်ဆယ်လောက် ကျယ်ကျယ်လွင့်လွင့် သပ်သပ်ရပ်ရပ်ကလေး။ အဲဒါလေးမှ ကျပ် နှစ်သောင်းပဲ ဈေးခေါ်တာခင်ဗျ။
ကျွန်တော်ဖြင့်သဘောကျတယ်။ ဒါပေသည့် ကျွန်တော့်မှာ ပြောရေးဆိုခွင့် မရှိဘူး။ ဘယ်အဖေ ဘယ်အမေကမှလည်း ကျွန်တော့်သဘောထားကို အဖက်လုပ် မေးမနေဘူး။ ကျွန်တော်သာဆိုရင်တော့ ကိုယ့်သားသမီးတွေကို မေးမိမှာ။ တစ်လျှောက်လုံးလည်း မေးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ့ပိုက်ဆံလောက်နဲ့ ဆိုရင် ကျောက်ကုန်းလောက်မှာ ခြံနဲ့ဝင်းနဲ့ ပျဉ်ထောင်အိမ် ကောင်းကောင်းလည်း ရနိုင်တယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အဖေ တောသားက ရန်ကုန်မြို့လယ်မှ မြို့လယ်။ သူက ရန်ကုန်မြို့လယ်ကို လွှတ်မက်တဲ့သူ။
သူ့ရုံးကလည်း လွစ္စလမ်း (ခု ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း)နဲ့ ကုန်သည်လမ်း ထောင့်မှာ။ ကျွန်တော့်ကျောင်းကလည်း စိန်ပေါ။ အဲတော့ ဈေးနီး၊ ကျောင်းနီး၊ ကားမှတ်တိုင်နီးတဲ့ လမ်း ၄၀ အထက်လမ်းက တိုက်ခန်းလေး တစ်ခန်းကို ကျပ် ခုနစ်ထောင်နဲ့ ၀ယ်ချလိုက်ပါတယ်။ အမှတ် ၂၃၉ ပထမထပ် ညာဘက်ခန်းပေါ့။
အမေ့မှာ ပိုက်ဆံတွေ အများကြီး ပိုနေပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ၀ယ်လိုက်တဲ့ အခန်းကိုလည်း ပြင်ရ ဆင်ရကောင်းမှန်း မသိဘူး။ နောက်ထပ် အခန်းပို တစ်ခန်းလောက်ဖြစ်ဖြစ် ၀ယ်ထားရ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ထားရ ကောင်းမှန်းလည်း မသိဘူးဆိုတော့ အဲဒီ့ ပိုတဲ့ ပိုက်ဆံတွေက တဖြည်းဖြည်း ပလုံကုန်တော့တာပေါ့။
မူလ အခန်းပိုင်ရှင်က တရုတ်တွေပါ။ သူတို့က မကာအိုကို အပြီးအပိုင် ပြောင်းကြတော့မှာမို့ အခန်းကို ရောင်းသွားတော့တာပါ။ သူတို့တုန်းက ဖြစ်သလို နေခဲ့တဲ့အတိုင်း ဆက်နေလိုက်ကြတာပါပဲ။
တကယ်ဆို အိမ်သာလေး၊ ရေချိုးခန်းလေးလောက် ပြင်ရင်ကို အတော်ဟုတ်ဦးမယ်။ အခုတော့ ဖြစ်သလို။
အမှန်တော့ အဆင့်အတန်းက စကားပြောပြန်တာပါပဲ။ တွင်းအိမ်သာနဲ့ နေလာခဲ့တဲ့သူအတွက် တိုက်ခန်းထဲက ရေဆွဲအိမ်သာ အပျက်ကနေ ရေလောင်းအိမ်သာ အစုတ်တစ်ဖြစ်လဲ ဖြစ်နေတာကိုက အတော်ဟုတ်နေပါပြီ။ အဲတော့လည်း ဖြစ်သလိုပေါ့။
သားအမိ သားအဖ သုံးယောက်အတွက်ကတော့ ၁၂ ပေခွဲ၊ ပေ ၅၀ အခန်းလေးက အတော်လေး ကျယ်လွင့်ပါတယ်။ တချို့အိမ်နီးချင်းတွေဆို အဲလို အခန်းလေးမှာ လူ ဆယ်ယောက်လောက် နေကြတာကလား။
ပတ်ဝန်းကျင်က တရုတ်တွေ များတယ်။ အဖေ၊ အမေကို နင်နဲ့ ငါနဲ့ ပြောတဲ့သူတွေပေါ့။ မျက်နှာချင်းဆိုင် အောက်ထပ်အခန်းမှာက ဗာကင်သကြားလုံးစက် ရှိတယ်။ အဲဒီ့သကြားလုံးက ပြည်သူပိုင်သာ မသိမ်းခင်က မြန်မာပြည်မှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက် သကြားလုံး။ လေယာဉ်တွေပေါ်မှာ ကျွေးတာ။
လေယာဉ်ဆိုလို့ အဲဒီ့ ၁၉၆၉ အထိ ကျွန်တော့်မှာ ဖှော့ခါ (အသံထွက်အမှန်က ဖှာ့ခါ၊ ပြောမကောင်းလို့။) လေယာဉ်ဆိုတာ မစီးဖူးသေးဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ ဖှော့ခါ လေယာဉ်သစ်တွေ စသုံးခါစ အချိန်။ အဲဒီ့ ဖှော့ခါ ဖှရဲ(န်)(ဒ်)ရှစ်(ပ်)ဆိုတဲ့ လေယာဉ်က ၁၉၆၆ မှာ စပေါ်တာ ထင်တယ်။
လောဓလေ့မှာ နေနေစဉ် တစ်လျှောက်လုံး စီးခဲ့ရတာက ဒါကိုတာ (Dakota) လေယာဉ်တွေပါ။ ဒါကိုတာ လေယာဉ်က မော့မော့ကြီးတွေ။ ဦးပိုင်းက ထောင်နေတယ်။ လေယာဉ်ပေါ် လမ်းလျှောက်တဲ့အခါ ကုန်းလျှောလေးမှာ လျှောက်ရသလိုပဲ အားစိုက်ရတယ်။
နောက်တစ်ချက်က အဲဒီ့ခေတ်က လေယာဉ်ပေါ်မှာ လူတကာ ဆေးလိပ်သောက်ကြတယ်။ အဲဒါတော့ အတော် လွမ်းသားဗျ။ ကျွန်တော်တော့ လေယာဉ်ပေါ် မသောက်ဖူးလိုက်ပါဘူး။ သောက်တတ်တဲ့ အရွယ်မရောက်ခင် စီးခဲ့ရတာကိုး။ လူကြီးတွေ ထောင်းထောင်းထအောင် သောက်နေတာပဲ မြင်ဖူးခဲ့တာပါ။
အဲဒီ့ခေတ်က လေယာဉ်မောင်၊ လေယာဉ်မယ်တွေရဲ့ အင်္ဂလိပ်အသံထွက်တွေက ထူးရှယ်ပဲ။ ဗြိတိသျှသံ ပီပီသသကြီးနဲ့ကို ပြောနေတာ။ နားထောင်လို့ သိပ်ကောင်းခဲ့တယ်။ အခုခေတ်တော့ ချာပါ့။
ကျွန်တော်နဲ့ လေယာဉ်နဲ့ ဇာတ်လမ်းဆုံးသွားတာ ငါးတန်း စ တက်ကတည်းကပေါ့။ ငါးတန်းပြီးလို့ ရန်ကုန် လာတော့ ရထားကြီးနဲ့ ဖြစ်သွားပြီ။ အဲဒီ့ကနေ တက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ်အထိ လေယာဉ်နဲ့ ပြတ်သွားတော့တာ။ အဲတော့ ဖှော့ခါတွေ အမှုထမ်းသက် အတော်ရင့်ကာမှပဲ စီးဖူးပါတော့တယ်။
ဗာကင် သကြားလုံးကနေ လေယာဉ်ရောက်သွားတယ်။
ကျွန်တော်တို့ လမ်း ၄၀ တိုက်ခန်းက ဖရေဇာလမ်းဘက်က အ၀င်စပ်မှာ။ ဖရေဇာ ဘက်က ၀င်ရင် အနောက်ဘက်တန်းက ပထမဆုံးတိုက်ပေါ့။ တိုက်ခန်း လေးခန်းတွဲ လေးထပ်တိုက်။ ၁၉၂၀ ၀န်းကျင်က ဆောက်ခဲ့တာ။ ကျွန်တော်တို့အခန်းက မြောက်ဘက် ထောင့်ခန်း။ ဘေးက တိုက်က ပြိုသွားလို့လား၊ ပျက်သွားလို့လား မသိဘူး၊ မြေကွက်လပ်ပဲ ရှိနေတယ်။
ဘေးတိုက်ရှိခဲ့တဲ့အတွက် ထောင့်ခန်းဖြစ်ပေမယ့် ဘေးပြတင်းတံခါးမရှိဘူး။ နံရံနှစ်ဘက်ကြား အလုံပိတ်။ ရှေ့ဝရံတာ ထွက်တဲ့ တံခါးရယ်၊ နောက်ဖေး မီးဖို ပြတင်းရယ်ပဲ ရှိတယ်။
ဘေးခန်းက မိသားစုများတယ်။ အဲဒီ့မှာ မမချောချော တစ်ယောက်ရှိတယ်။ (အဲဒါကို သားငယ်သမီးငယ်များ ပဲ့ပြင်ထိန်းကျောင်းခြင်း အနုပညာမှာရော၊ ချစ်သူ့ရင်ခွင် ရှာပုံတော်မှာပါ ရေးခဲ့ပြီးမို့ အကျယ်မချဲ့တော့ပါဘူး။) အပေါ်ထပ်က မိသားစုကိုတော့ သိပ်မမှတ်မိတော့ဘူး။ ကုလား မိသားစု ထင်တယ်။
ဘေးခန်း အပေါ်ထပ်မှာတော့ ဘေးခန်းက အိမ်ရှင်ရဲ့ ညီနဲ့ သူ့မိသားစုနေတယ်။ သူက လက်သမားလုပ်တယ်။ ဘေးခန်းက စခေါ့(ထ်)မားခစ်(ထ်) (ဗိုလ်ချုပ်ဈေးဗျာ၊ ကျွန်တော်က ဟိုခေတ်ကို ပြန်သွားနေတာမို့ ဟိုခေတ် အသုံးတွေ တမင်သုံးနေတာ။) မှာ ဆိုင်ထွက်တယ်။ သူတို့မှာက မော့(စ်)ဗှစ်(ခ်ျ)လို့ မြန်မာတွေက ခေါ်ကြတဲ့ Moskovich ကားလေးတစ်စီးရှိပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ပရီဖှက် (Ford Prefect) တစ်စီး ထပ်ဝယ်လိုက်တယ်။
သူတို့အောက်ထပ်က တရုတ်မိသားစုကျတော့ တရုတ် သားအဖ သုံးယောက်နေကြတာ။ အဘိုးကြီးက ခြေတစ်ဖက် မသန်ဘူး။ သားကြီးက အပ်ချုပ်ဆိုင် ဖွင့်ထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အောက်ထပ်မှာတော့ တရုတ်မကြီးတစ်ယောက်နဲ့ သားနှစ်ယောက်နေတယ်။
သားကြီးက ကိုအားလီလို့ ခေါ်တယ်။ ဗမာနာမည်လည်း ရှိပေမယ့် မမှတ်မိတော့ဘူး။ သူက တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားလား၊ ဘွဲ့ရပြီးသားလားဆိုတာလည်း မမှတ်မိတော့ဘူး။
သေချာတာကတော့ ခုနစ်တန်း၊ ရှစ်တန်းမှာ အဖေတို့က သူ့ဆီမှာ သင်္ချာသင်ခိုင်းလို့ သင်ရတယ်။ ဘာမဟုတ်တာလေး မှားရင်တောင် အင်မတန် ရိုက်တတ်၊ လိမ်ဆွဲတတ်တဲ့သူမို့ သူ့ကို ကျွန်တော် မုန်းတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူး။ ရွေးချယ်ခွင့် မရှိတဲ့ဘ၀လေ။
သူ့ညီ ကိုအောငံ၊ ဗမာနာမည် ကိုသိန်းစိုးက ကျွန်တော့်ထက် နှစ်တန်းကြီးတယ်။ သူက ပဲများတယ်။ အမြဲတမ်း ဘိုကေလေး တသသနဲ့။ သူ့ရဲ့ ညာဘက်လက်မောင်းအလယ်မှာ အနာပေါက်ပြီးတဲ့နောက် တစ်ခုခု ချို့ယွင်းသွားလို့ အဲဒီ့လက်တစ်ဖက်က ကပ်တပ်တပ်လေး ဖြစ်နေတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူနဲ့ ရွယ်တူတွေသာမက သူ့ထက်ငယ်သူ တချို့ကပါ သူ့ကို လက်ကပ်လို့လည်း ခေါ်ကြတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အားနည်းချက်ကို ဖဲ့တတ်တဲ့ လူ့သဘာဝပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ သူ့ကို အဲလို တစ်ခါမှ မခေါ်ဖူးဘူး။
သူတို့ ညီအစ်ကို နှစ်ယောက်က ဗမာစကားကို ရေရေလည်လည် ပြောတတ်ပေမယ့် သူတို့အမေကြီးကတော့ ဘောင်းဘီဝတ် ပေါက်ဖော်မကြီးပီပီ ဗမာစကားကို ကပေါက်တိ ကပေါက်ချာ ပြောတယ်။
သူတို့အဖေက ဟိုတယ်တွေ ဘာတွေ ပိုင်ခဲ့ဖူးတယ် ဆိုပဲ။ သို့ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ရောက်ချိန်မှာတော့ သူတို့ တော်တော်ချို့ချို့တဲ့တဲ့ ဖြစ်နေပြီ။ အဖေ မရှိတော့လို့ရယ်၊ ပြည်သူပိုင်သိမ်းတာရယ်၊ တရုတ်-ဗမာ အရေးအခင်းဒဏ်ရယ်တွေကို ခံစားထားရလို့လည်း ဖြစ်မယ်။
သူတို့အိမ်က သားအမိ သုံးယောက်နေကြပြီး ကိုအားလီက အိမ်သိပ်မကပ်ဘူး။ အဲတော့ ကိုသိန်းစိုးဆီမှာ သူ့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ စုဝေးရာ ဖြစ်နေတယ်။ အဖေက အဲဒီ့ လူငယ်တွေနဲ့ အဖွဲ့ကျတယ်။
ကိုသိန်းစိုးက ဂစ်တာတီးတယ်။ ကျွန်တော့် ဂစ်တာဆရာလို့ ပြောရမှာပေါ့။ သူ့ဂစ်တာနဲ့ သူ့ဆီကနေ သင်ခဲ့ရတာ။ C, Am, F, G ဆိုတဲ့ chord လေးခုနဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ် အစအဆုံးဖြစ်တဲ့ သီချင်းပေါ့။ မစိမ်းကားဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့လည်း အဲဒီ့အလိုက်နဲ့ သီချင်းရှိတယ်။ တက္ကသိုလ်ထွန်းနောင်ရဲ့ သီချင်းကကျတော့ ပန်းတစ်ရာနဲ့ အနမ်းတစ်ရာ။ အဲဒီ့အလိုက်ကိုပဲ ဂျင်မီဂျက်(ခ်)ဆိုတဲ့ လားရှိုးသိန်းအောင်က သေသည့်တိုင် လူပျိုပဲလား ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆိုထားတာလည်း ရှိတယ်။ ဘာစာသားနဲ့ဆိုဆို C, Am, F, G ပဲ။ အဲဒါနဲ့ ကျင့်ခဲ့ရတာ။ ခုနစ်တန်းလောက်မှာ စ သင်ခဲ့တယ် ထင်ပါရဲ့။
ဘ၀ကတော့ တော်တော် ခြစ်ခြစ်ကုတ်ကုတ် ကြပ်ကြပ်တည်းတည်း။ အဖေက အထက်တန်းစာရေးပေါ့။ သို့ပေမယ့် လက်နှိပ်စက်စာရေးပါပဲ။
အဖေ့ရုံးကို ခေါ်ခေါ်သွားရင် လိုက်လိုက်သွားရတယ်။ အဲဒီ့က စာရေးမလေး တစ်ယောက်ကိုလည်း ကျွန်တော် မှတ်မိနေသေးတယ်။ မျက်မှန်လေးနဲ့ မျက်လုံးပြူးပြူး၊ ရှိုးကောင်းကောင်းလေး။ အဖေနဲ့ တစ်ခန်းတည်းက။ ကျွန်တော့်ကို ရုံးနားတ၀ိုက် ခေါ်သွားပြီး မုန့်တွေ ဘာတွေ ကျွေးဖူးတယ်။
ကျွန်တော့်မှာ မောင်နှမရင်းချာ မရှိတော့ အဲလို ချောချောလေးက ကျွန်တော့်ပခုံးကို ဖက်ပြီး ခေါ်သွားတာမျိုးကို သဘောကျတာပေါ့။ သူ့ကျတော့ ပြစ်မှားတဲ့ စိတ်နဲ့ မဟုတ်ဘူး။ အစ်မတစ်ယောက်လိုမျိုး သာယာမိတာပါ။
အဖေ့လခက သုံးရာကျော်ကျော်လား ရတယ်။ ကျော်တယ်ဆိုရုံကလေးတောင် ထင်ရဲ့။ အမေက တစ်နေ့ ဈေးဖိုး တစ်ဆယ်သုံးတာလည်း မှတ်မိတယ်။ ကျွန်တော်က တစ်နေ့ မုန့်ဖိုး တစ်မတ်ရပါတယ်။
အထက ၆ ဗိုလ်တထောင်ကို စရောက်တုန်းက ကျောင်းသားသစ်တွေကို တန်းခွဲ M မှာ ထားတယ်။ အဲဒီ့ ကျောင်းမှာ ဘယ်လောက် လူများသလဲဆိုတာ အဲဒါသာ ကြည့်တော့။ M တန်းဆိုတော့ မြန်မာလို ပြောရင် တန်းခွဲ ဋရင်ကောက်ပေါ့။ တန်းခွဲ ၁၃ ခုမြောက်။
ကျွန်တော်က အဲဒီ့အတန်းမှာ နေရတယ်။ အဲဒီ့အတန်းမှာက နှစ်ကျတွေ၊ ဗရုတ်ဗရက်တွေ အလွန်များတယ်။ ကျွန်တော့်ထက် အသက် နှစ်နှစ် သုံးနှစ်ကြီးတဲ့သူတွေလည်း ပါတယ်။ ကျွန်တော်က သိပ်လည်း မထွားတော့ အတန်းထဲမှာ ကလေးလို ဖြစ်နေတာပေါ့။
ကျွန်တော်နဲ့ ဘေးချင်ကပ် ထိုင်ရတဲ့သူကို နာမည် မမှတ်မိတော့ဘူး။ သို့ပေတည့် သူ့ရဲ့ အကျင့်ပေါင်းစုံကိုတော့ မှတ်မိနေတယ်။
ကျွန်တော်တို့အတန်းကို မြန်မာစာ သင်တဲ့ဆရာမက ကိုယ်လုံးအတော်လှတယ်။ ဒေါ်တင်လှပေါ့။ အဲဒါကို အဲဒီ့ ကောင်က တစ်ချိန်လုံး ထိုင်ပြစ်မှားနေတာ။
သူတင်လားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျွန်တော်အပါအ၀င် တစ်တန်းလုံး နီးပါးက ဆရာမများ သင်ပုန်းဘက် စာလှည့်ရေးနေရင် ဆရာမ တင်ပါးကနေ မျက်လုံး ခွာမရနိုင်အောင် ဖြစ်နေခဲ့ကြတာကလား။
သို့ပေမယ့် ကျွန်တော့်ဘေးက ထိုင်တဲ့ကောင်ကတော့ ကျွန်တော်တို့လို မနောကံနဲ့တင် မပြီးဘူး။ ၀စီကံနဲ့ပါ တက်တခေါက်ခေါက်၊ ပါးစပ်နဲ့ တစ်လုံး ပြစ်မှားလို့ မဆုံး။
အဲဒီ့အတန်းမှာ သိပ်ကြာကြာမနေလိုက်ရဘူး။ လပိုင်းပဲ နေလိုက်ရပြီး တန်းခွဲကို ဖျက်လိုက်တယ်။ တန်းခွဲက ကျောင်းသားတွေကို ကျန်တဲ့ တန်းခွဲတွေဆီ ခွဲထည့်လိုက်တာပေါ့။
ကျွန်တော်နဲ့ ဘသာဆိုတဲ့ တစ်ယောက်က အေတန်း (တန်းခွဲ က)ကို ရောက်သွားတယ်။ ဘသာက အဲဒီ့အရွယ်ကတည်းက ရေကူးတံခွန်စိုက်မှာ အတော်ဟုတ်နေပြီ။ ဗလကြီးကြီး၊ အောက်ပိုင်းရှူးရှူး။ အသားဖြူဖြူ။
အေတန်းမှာကျတော့ အားလုံးက စာကြမ်းပိုးတွေချည်းပဲ။ အရွယ်တွေကလည်း ကျွန်တော်နဲ့ မတိမ်းမယိမ်း။ လူလေးတွေက နုနုဖတ်ဖတ်၊ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့တွေ များတယ်။ မန္တလေးမှာ အတတ် ပေါင်းစုံလာတဲ့ ကျွန်တော်က သူတို့ကြားမှာ အရိုင်းအစိုင်းပေါ့။
ရန်ကုန်ရောက်တော့ ဆေးလိပ်ကို အတော်သောက်နေပြီ။ စီးကရက်တစ်လိပ်မှ ဆယ်ပြားပေးရတာ။ ဒူးယားက ဆယ်လိပ်ဝင်ဘူးဆိုရင် ပြား ၉၀၊ အလိပ် ၂၀ ၀င်ဘူးဆို တစ်ကျပ်နဲ့ ပြား ၈၀၊ အလိပ် ၅၀ ၀င် သံဘူးဆိုရင် ငါးကျပ် ထင်တယ်။ အဖေကလည်း တအားသောက်ပေါ့။
အိမ်က ထွက်လိုက်ပြီး ကျောင်းဘက်ကို သွားဖို့ ဖရေဇာလမ်းပေါ် ရောက်တာနဲ့ ကုလား ကွမ်းယာဆိုင်က အသင့်စောင့်နေတယ်။ အဲဒီ့ကွမ်းယာဆိုင်မှာ ဆေးလိပ်တစ်လိပ်ဝယ် သောက်ရုံပဲ။ ဘိုင်ကျနေရင် စီးကရက်ထက် ဈေးပေါတဲ့ ဆေးပေါ့လိပ် ၀ယ်သောက်ပေါ့။
Mai Xinh Dep ဒယ်နဲ့ သမီးနဲ့ တင်ပါးကြိုက်တာခြင်းတူတယ်တော့ သမီးက လုံးလုံးကျစ်ကျစ်ကလေးတွေဆို ကျားရောမရော မကျားတကျားကော မရွေးဘူး သိပ်ကြိုက်တာ ခွိခွိ
Sandar Tin မခမ်းဆိုလို့မန္တလေးမှာနေတုန်းက စားခဲ့ဘူးတာ အမှတ်ရမိပါတယ်။
Author lettwebawPosted on 13 March 2015 30 March 2015 Categories Memoirs
5 thoughts on “အဟောင်းထဲက အစုတ်တွေ – ၄”
14 March 2015 at 2:23 am
14 March 2015 at 2:33 am
ကျေးဇူးပါဗျာ။ သည်ဘလော့(ဂ်)မှာ တင်သာ တင်ထားရတယ်။ ဖတ်တဲ့သူမှ ရှိရဲ့လားလို့တောင် တွေးမိနေတဲ့အထိပါပဲ။ ပရိသတ်ဘက်က ဘာသံမှ မကြားရလို့ပါ။ အခုလို ပြောပေးတဲ့အတွက် အထူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
Nang Amy says:
22 April 2015 at 11:35 am
တစ်နေရာတည်းမှာ အပြုံလိုက်ဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးပါ.. 😀
22 April 2015 at 12:13 pm
soe kyi says:
14 September 2015 at 11:55 am
Previous Previous post: အဟောင်းထဲက အစုတ်တွေ – ၃
Next Next post: အဟောင်းထဲက အစုတ်တွေ – ၅